“ရွှေမြန်မာ”: October 2009
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Friday, October 30, 2009 1 comment:
အဆိုပါ ဟောပြောပွဲကို အောက်တိုဘာလ ၃၁ရက် (စနေနေ့) နေ့လယ် ၁းဝဝ နာရီမှ ၃းဝဝ နာရီအထိ ရန်ကုန်မြို့၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ Myanmar Info-Tech ရှိအခန်း ၂ဝ၅ တွင်ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ရတနာပုံ တယ်လီပို့(တ်) မှ ဦးကျော်နိုင်က Networking, Telecommunication စသည်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ ဟောပြော ဆွေးနွေးပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၄င်းဟောပြောပွဲကို IP Network အပေါ်၌ Voice Service အလုပ်လုပ်ပုံကို ကောင်းမွန်စွာနားလည်စေ ရန် ရည်ရွယ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပြီး Networking, Telecommunication အစရှိသည်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်း ဝင်နေသူများအပါအဝင် စိတ်ဝင်စားသူမည်သူမဆို တက်ရောက်နိုင်ကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါဟောပြောပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း ရုံးခန်း၊ အဆောင် ၄၊ အခန်း ၄၊ မြန်မာအင်ဖိုတတ်ခ်။ ဖုန်း - ၆၅၂၂၇၆ သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Thursday, October 29, 2009 No comments:
အကြောင်းအရာက: နည်းပညာ, သတင်း
Time : 10 am2pm
Venue : Park Royal Hotel Ballroom, Yangon Hotel Mandalay, Sabai Phyu Hall
Proudly representing TAYLOR’S since the yerar 2000
# 18-4(A) THABYAY NYO(2), U HTUN LIN CHAN STREET, HLEDAN, KAMARYUT, YANGON.
PH : 09 – 5062891
# 145, btw 31 × 32 and 58 × 59 , SHWE YI MON QRT, CHAN AYE THA ZAN, MANDALAY
PH : 09 – 2225342, 09 – 6810318
မှန်ကန်သော ဆေးနည်းဖြစ်ကြောင်း ဦးစွာ ပြောပါရစေ။ အမျိုးသားကော
အမျိုးသမီးပါ လွယ်ကူစွာ သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆေးနည်းဟာ
ငွေကုန်သက်သာတဲ့အပြင် လျင်မြန်စွာ ပျောက်ကင်းပါတယ်။
ရှောက်ရွက်နှင့် ရှောက်သီးရဲ့အခွံတွင် အဖိုးတန်တဲ့ အဆီဓာတ်တစ်မျိုး
ပါရှိပါတယ်။ ထိုအဆီဓာတ်ဟာ လေရောဂါများ၊ အသည်းနှလုံးကို
အဆီဖုံးခြင်းမှလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ အ၀လွန်သူများ၊
ဗိုက်ခေါက်ထူပြီး အလှပျက်အောင် ၀မ်းဗိုက်ရွှဲလာသော အမျိုးသမီး၊
အမျိုးသားများအတွက် အလွယ်တကူ ဖော်စပ်သုံးနိုင်တဲ့နည်းကို တင်ပြလိုက်
ပါတယ်။ ပထမ ရှောက်ရွက်ကြမ်းတွေကို
အရင်ရှားထားပါ။ ပုလင်းတစ်လုံးစီတွင် ရိုးရိုးသကြား သုံးဇွန်း
(ဟင်းစားဇွန်း) စီ ထည့်ရပါမယ်။ ပြီးရင် ပုလင်းတစ်လုံးစီမှာ
ရှောက်ရွက်ကိုးရွက်စီ ထည့်ပေးပါ။ နောက် ရေကျက်အေးများ ပုလင်းထဲသို့
အပြည့်ထည့်ပြီး အဆို့ပိတ်ပြီး နေပူထဲ တွင် ကိုးရက်လှန်းပေးပါ။
ကိုးရက်စေ့လျှင် ထိုရှောက်ရွက်စိမ်ထားသော ပုလင်းများကို ဆေးအဖြစ်
အသုံးပြုလို့ ရပါပြီ။ နံနက်တစ်ကြိမ် ညတစ်ကြိမ်တို့၌ အဆိုပါ
ရှောက်ရွက်ဆေးရည် ပုလင်းကို လှုပ်ပြီး
လက်ဖက်ရည်အကြမ်းပန်းကန်တစ်ဝက်ခန့်ကို မှန်မှန်သောက်သုံးပေးပါ။ တစ်လမှ
နှစ်လခန့်ရှိသောအခါ အမျိုးသမီးများ ခါးသေးရင်ချီပြီး အဆီပို
ဒီနည်းက အဆီကျဆေးတို့ ဘာတို့ စားခြင်းထက် စိတ်ချရတဲ့ မြန်မာရိုးရာ
ဆေးနည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဆေးရည်ကို မှန်မှန်သောက်သုံးပေးခြင်းကြောင့်
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Thursday, October 29, 2009 1 comment:
စာရေးဆရာ နီကိုရဲ (သို့) ကိုရဲဝင်း သည် ၂၃၊ ၁၀၊ ၂၀၀၉ ရက်တွင် ကွယ်လွန်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ၂၇၊ ၁၀၊ ၂၀၀၉ ရက်နေ့တွင် မီးသဂြိ င်္ုဟ်မည်ဟု ကြားသိရပါကြောင်း....
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Saturday, October 24, 20092comments:
မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းစာအုပ်ပြန်လည်မိတ်ဆက်ပွဲနှင့် အမျိုးသမီး ထုတ်ဝေသူများ စာအုပ်ဈေးရောင်းပွဲ
ဒီနေ့မနက် စာအုပ်အရောင်းလက်မှတ်ထိုးပွဲတစ်ခုကို အင်းဝစာအုပ်တိုက်
ပထမထပ်မှာ မနက် ၉ နာရီမှာ ကျင်းပတာကို ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ စာအုပ်တိုက်က
ပုဂံစာအုပ်တိုက်မှ ထွက်ရှိခြင်း ဖြစ်ပြီး စာအုပ်အမည်ကတော့
ပြန်လည်ထုတ်ဝေထားကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။ အရင် ထုတ်ဝေတဲ့စာတွေအပြင်
ထပ်မံရေးသားထားချက်များကိုပါ ပေါင်းစုထားကြောင်းနှင့် ဦးနတ်နွယ်သည်
ကျန်းမာရေးမကောင်းပေမယ့် စာဖတ်သူ ပရိသတ်များကို လက်မှတ်ထိုးပေးဖို့
နောက် တစ်ဖွဲဖွဲနှင့် စာရေးဆရာများ စုံလင်စွာ တက်ရောက်ကြောင်း
တွေ့ရှိရပြန်ပါတယ်။ ခဏကြာတော့ ဆရာ ဆင်ဖြူကျွန်းအောင်သိန်း ရောက်လာပါတယ်။
နောက် ဦးမိုးသူတို့၊ ဦးတင်စိန်(ပထ၀ီ)တို့၊ ဘာသာပြန်ဆရာများလည်း
နည်းနည်းကြာတော့ ဆရာ ပါရဂူသည် မနိုင်တနိုင်နဲ့ နှစ်စဉ် ငါ့ကို
နှိပ်စက်တယ်ပြောပြီး ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ နောက် ဆရာ ချစ်ဦးညိုကလည်း
မဟေသီနဲ့အတူ အခမ်းအနားကို အမြဲတက်ရောက်တဲ့ ၀တ်မပျက် တက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
ခဏကြာတော့ MRTV4မှ သတင်းယူဖို့နဲ့ ဂျာနယ်များမှ အင်တာဗျူးများလည်း
တစ်ဖွဲဖွဲနဲ့ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ တွေ့ရှိရပါတယ်။
ပုဂံစာအုပ်တိုက်သည် မြန်မာမှု မြန်မာစာပေများကို သေသပ်လှပစွာနဲ့
အရည်အချင်းများကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခဲ့တာ ခုဆိုရင် ၂၀၀၃ - ၂၀၀၄
ခုနှစ်မှစပြီး ပြန်လည်အသက်ဝင်လာခဲ့တာဟာဖြင့် ခုချိန်တိုင်အောင်ပါပဲ။
ပုဂံစာအုပ်တိုက် စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဆိုရင် ၁၉၆၂ ခုနှစ်ထဲကလို့
ပြောရမှာပေါ့။ မိဘလက်ထက်ကနေ သားသမီးလက်ထက်ထိတိုင်အောင် မြန်မာစာပေ
အရေးအသားများ ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခဲ့တာ အလွန်တရာမှ ၀မ်းသာစရာ ကောင်းလှပါတယ်။
ယခုလည်း မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းသည် မြန်မာသူမြန်မာသားများ အလွန်တရာ
မသိမမှီတာတွေကို ဒီစာအုပ်ထဲမှာ တွေ့ရှိရခြင်းဟာ အလွန်တရာမှ
မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း စာအုပ်သည် တန်ဖိုးက ၁၀၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်။
ခုလက်ရှိတော့ စာအုပ်ဈေးရောင်းပွဲအတွင်း ၀ယ်ရင် ၈၀၀၀ ကျပ်နဲ့
စာအုပ်ပြန်လည်မိတ်ဆက်ပွဲနှင့် အမျိုးသမီး ထုတ်ဝေသူများ
ပုဂံစာအုပ်တိုက်၊ ပြုံးစာပေ၊ ဇွန်ပွင့်၊ ရန်အောင်၊ ရန်အောင် ၂၊
ကံ့ကော်ဝတ်ရည်၊ မျိုးဆက်သစ်၊ နေရီရီ တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၄၊ ၁၀၊ ၂၀၀၉ မှ ၂၈၊ ၁၀၊ ၂၀၀၉ ရက်ထိ အင်းဝစာအုပ်တိုက် ပထမထပ်တွင် မနက် ၉
နာရီမှ ၅ နာရီအထိ ရောင်းချလျှက် ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Saturday, October 24, 2009 1 comment:
ကို ZOX ရဲ့ တဂ်ပိုစ့်လေးတစ်ခုဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ မတဂ်လည်း
ပြောပြချင်တာ တွေ ပြောဖို့ စိတ်ထဲမှာ ရှိပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွန်မ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ဂျာနယ်ထဲထည့်ဖို့ ပို့ထားတာ ရှိပါတယ်။ မပါတော့ မပါလာသေးပါဘူး။ တစ်ခါတလေ ပြောသင့်တယ်လို့ ထင်ထားပေမယ့် ဆရာလုပ်တယ်လို့ မြင်ကြတာ ခုနောက်ပိုင်း လူငယ်တော်တော်များများရဲ့စိတ်လို့ ပြောရ မလားပါပဲ။ နောက်တစ်ချက်က ကျွန်မအနေနဲ့ သိတာ မြင်တာကို ဖြန့်ဝေသလို အချိန်ကို အလဟဿ မသုံးမိကြစေဖို့ နီးစပ်ရာကို ဆရာလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တော်တော်များများက ချက်တင်ပိုင်းကို အားသန်နေ တာ တွေ့ကြရပါတယ်။ ကျွန်မ မေးကြည့်တယ်။ အင်တာနက်သုံးရင် ဘာတွေသုံးလည်းလို့ မေးကြည့်တော့ ချက်တာပေါ့တဲ့။ မချက်ပဲ တခြားလေ့လာစရာရှိတာတွေ အများကြီးပဲ အင်တာနက်ရွာကြီးထဲမှာ ရှိနေတယ် ဆိုတာ သိကော သိကြရဲ့လား။ ကျွန်မက တတ်နိုင်သမျှ အချိန်၊ ငွေ မဖြုန်းတီးဖို့ အကျိုးရှိတာကို လုပ်ဖို့
ပြောပြတော့ ကျွန်မကို အန်းတိတ်တဲ့။ အပျိုကြီးတွေများ ဇီဇာကြောင်တာတဲ့၊ ဒါကြောင့် အပျိုကြီးဖြစ်တာလို့ ဝေဖန်မှုတွေ ကြုံဆုံလာခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်မကတော့ အပြုံးမပျက် ဆက်လက် တိုက်တွန်းမြဲပါပဲ။ တချို့ကျတော့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိလို့ပါတဲ့။ ဒါဆိုရင် ကျွန်မ လမ်းကြောင်းပေးပါတယ်။ သွားချင်တာ ဖြစ်ချင်တာ ကို အကောင်အထည်ဖော်လိုက်တဲ့အခါမှာ လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ အရည်အချင်းဆိုတာ ရှိကြပါတယ်။ ထုတ်မသုံးကြလို့သာ မသိမတတ်တဲ့သူတွေရှိနေတာလို့ ကျွန်မတော့ မြင်မိပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်ကလူတွေရဲ့ အတွေးအခေါ်ကို ပုံစံပြောင်းဖို့လည်း လိုမယ်လို့ ယူဆမိတယ်။ ကျွန်မကို တချို့က မေးတယ်။ အင်တာနက်သုံးတာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲတဲ့။ ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်မ အင်တာနက်ဆိုတာ စသိသုံးတဲ့အချိန်က ၁၉၉၈ ခုနှစ်ပါ။ ကျွန်မ ကုမ္ပဏီမှာ စပြီးဝင်လုပ်မှ သိရှိခဲ့ရတာပါ။ ဒါတောင်မှ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကွန်ပျူတာကုမ္ပဏီ ၁၁ ခုကိုပဲ အင်တာနက် တပ်ဆင်ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့အချိန်ကာလဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
အဲဒီအချိန်ကတော့ ဟော့မေးလ် တို့ အရမ်းအသုံးများခဲ့တဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီး Yahooမေးလ်လည်း သုံးသင့်လောက်သုံးနေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အလုပ်ကိစ္စကလွဲပြီး ဘာမှသိပ်မသိသေးတဲ့အချိန်ပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ ဒီလိုပဲ လေ့လာရင်းနဲ့ သိရှိမှတ်သားလာခဲ့ရတာပါ။ လူတွေရဲ့အမြင်ဟာ ခုချိန်ထိ ကျဉ်းမြောင်းနေတုန်းပါလားလို့လည်း မြင်မိသလို နောက်တစ်ချက်က အင်တာနက်ဆိုင်မှာ လူငယ်လူရွယ်တွေ အချိန်ဖြုန်းချက်နေတာကို မြင်လို့လည်း ဒီလိုအတွေးတွေ ရှိနေကြတာပါလားလို့ ထင်မိပါတော့တယ်။ ကျွန်မကို ပြောပါတယ်။ တချို့က ဒီလောက် အင်တာနက်သုံးတာ ခုထိ အပျိုကြီးဖြစ်နေတုန်းလားတဲ့ ကျွန်မကတော့ ရယ်ပဲနေခဲ့ပါတယ်။
ဘာကြောင့် လဲဆိုတော့ အင်တာနက်သုံးတာ ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်လို့လည်း ရှင်းလည်း နားလည်မှာ မှမဟုတ်တာ မရှင်းပြတော့ပါဘူး။ ဒီတော့ မိတ်ဆွေ၊ သင်လည်း စဉ်းစားကြည့်လေ သင်လည်း အင်တာနက်သုံးတာ ဘာအတွက် လဲ လူတိုင်းမှာ သူ့အကြောင်းနဲ့သူ ရှိပါတယ်။ မသိလို့ သိအောင် တတ်ချင်တဲ့သူကို ရှင်းပြရတာ ဘယ်လောက်မောမော ကျွန်မ ရှင်းပြပေမယ့် နားလည်မှုလွှဲမှားစွာ အသုံးချနေသူများကို ဘယ်လိုလမ်း ကြောင်းမှန်အောင် ခေါ်ဆောင်သွားရမလဲဆိုတာ ကျွန်မ အမြဲစဉ်းစားမိပါတယ်။ ပိုက်ဆံပေါလို့ ချက်တင်ထိုင်ပြီး အချိန်ပိုလို့ ချက်နေကြတဲ့သူတွေနဲ့ ကျွန်မဘ၀ဟာ တခြားစီဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ အင်တာနက်သုံးရင် ကျွန်မအတွက် ငွေကုန်၊ အချိန်ကုန် အကျိုးရှိရမယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်ပါ။
ကျွန်မဘ၀က ကိုယ့်ခြေပေါ် ကိုယ်ရပ်တည်ခဲ့ပြီး ရပ်တည်ဆဲ လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ကျွန်မအတွက် အပိုငွေဆိုတာ မရှိခဲ့သလို မမျှော်မှန်းခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်မ အင်တာနက်ကို ဘယ်လိုသုံးရမလဲ ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ အသုံးချခဲ့တာပါ။ ကျွန်မအတွက် အပိုသုံးငွေလည်း မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ လမ်းကြောင်း တစ်ခုပေါ် ကျွန်မ အရောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ လျှောက်ခဲ့တာပါ။ အင်တာနက်သုံးခတွေက ခုနောက်ပိုင်းမှာ တော်တော်ဈေးကျလာတော့ ပိုပြီး ၀မ်းသာမိပါတယ်။ ကျွန်မ မသုံးရ မနေနိုင်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့
ဘလောဂ့်စလုပ်လာတည်းကဆိုပါတော့။ အင်း ပြောရရင် ကျွန်မ ဘလောဂ့်စလုပ်တဲ့နှစ်က ၂၀၀၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာမှာ စခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့်ပထမဆုံးဘလောဂ့်က ပျက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၆ သြဂုတ် ၃၁ ရက်မှာ ဆားဗစ်ပလတ်က ကိုရဲထွန်းအောင်က တစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ ဘလောဂ့်ဒေးဆိုပြီး ဟောပြောပွဲလုပ်ပါတယ်။
ကျွန်မ သွားတက်ခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ဆိုက်ကလည်း ပျက်တော့ စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့အချိန်ပါ။ ကျွန်မ တစ်ခုသဘောကျတာ ဘလောဂ့်လုပ်ပါပြီတဲ့ ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာ ခေါင်းထဲမှာ အရင်ဆုံးပေါ်လာတာပါ။ နောက်တော့ ဟုတ်ပြီ၊ စိတ်ထဲရှိတာ ရေးမယ်။ နောက်ပြီး ပြောသင့်လျှက် မပြောသင့်အပ်တဲ့နေရာ
အရပ်ဒေသအလိုက် လူတွေကို ငါ့ရဲ့ဘလောဂ်မှာ ပြောကြည့်မယ်ပေါ့။ ဥပမာ စိတ်ညစ်ရင် သူများပြောရင် နားငြီးတယ်လို့ ပြောရင်ပြောလိမ့်မယ်။ ငါ့ဘလောဂ်မှာ ပြောတော့ ဘယ်သူက ပြောမလဲဆိုတဲ့ အတွေးရရှိ သွားတယ်။ ဒါနဲ့ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ ပြန်ပြီး အသက်ပြန်သွင်းလိုက်တယ်။ မြန်မာဖောင့်မပေါ်သေးပါဘူး။
အဲဒီအချိန်က ဘလောဂ်စပေါ့တွေ ခေတ်စားနေတဲ့အချိန်ပါ။
ဒါပေမယ့် ဂိုဂယ်က မ၀ယ်ရသေးတဲ့အတွက် သတ်သတ်ပတ်စဝေါ့နဲ့ ၀င်ရတာပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ ဂိုဂယ်က ၀ယ်လိုက်တဲ့အတွက် ဂိုဂယ်မေးလ်နဲ့ချိတ်မှသာ ၀င်လို့ရတော့တာပါ။ နောက်တစ်ချက်က မှတ်မိသလောက် ပြောရရင် ၂၀၀၆ နှစ်မကုန့် တကုန်အချိန် လောက်မှာဇော်ဂျီဖောင့် ကို အလကားသုံးခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက် အရမ်းဝမ်းသာသွားမိပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်မက အင်္ဂလိပ်စာ ညံ့လို့ပါပဲ။ ဒါနဲ့ နောက်ပိုင်း ကုဒ်အကြောင်းနားမလည်တော့ တချို့ကုဒ်တွေဖျက်မိသွားတဲ့အတွက် ဆိုက်ဒ်လေးက ပျက်သွားပြန်ပါတယ်။
ကျွန်မလည်း မစားနိုင်မသောက်နိုင်တောင် ဖြစ်ခဲ့မိပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ကျွန်မ ခေါင်းထဲမှာ ခုထိ စွဲနေတဲ့ ဆောင်ပုဒ်တစ်ခုကိုလည်း မြင်ယောင်မိပါတယ်။ ဆောင်ပုဒ်က ပညာကိုသာ စွဲလမ်းပါ၊ အင်တာနက်ကို မစွဲလမ်းမိပါစေနဲ့။ တကယ့် ကောင်းပြီး လိုက်နာသင့်တဲ့ ဆောင်ပုဒ်တစ်ခုလို့လည်း ကျွန်မ စွဲမြဲစွာ လက်ခံမိပါတယ်။ ကျွန်မဘလောဂ့် လုပ်ပြီးနောက်ပိုင်း အီးမေးလ်ဆိုတာ နက်သုံးရင် ဒုတိယနေရာရောက်ရှိနေပါတယ်။ ဘလောဂ့်လေးကို ဖွင့်နေရရင် ကျေနပ်နေပါတယ်။ နောက်ပြီး ကျွန်မရဲ့ဘလောဂ့်ကို အရမ်းတန်ဖိုးထားမိတာက ကျွန်မက အလုပ်အသွားအပြန်ကို ရထားစီးပါတယ်။ ရထားခ ဈေးသက်သာတဲ့အတွက် ကားခအပိုထွက်လာပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ရထားစီးရင်း စာအုပ်ဖတ်လို့ရတာကိုလည်း ကျွန်မအတွက် တအားပါပဲ။ ဒီတော့ တစ်ချက် ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ် စာအုပ်ဖတ်ပြီး ရထားစီးတယ်။ ကားခထွက်လာတာကို အင်တာနက်သုံးခအဖြစ် အသုံးချခဲ့ခြင်းကြောင့်ပါပဲ။ တစ်နည်းကတော့ ကျွန်မရဲ့ချွေးနည်းစာနဲ့ ကျွန်မမှာ ရှိတဲ့ အသိအတတ် အမြင် အကြား အရာအားလုံးကို ၀န်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေကို ဖြန့်ဝေရတာ အလွန်ပဲ ပီတိဖြစ်မိပါတယ်။
တချို့ကမေးတယ်။ အစ်မ ဘလောဂ့်လုပ်တာ ပိုက်ဆံရလားတဲ့။ ဟုတ်ပါတယ်။ မေးလည်း မေးသင့်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ကျွန်မ မေးလ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ အမှန်ပြောရရင် ချက်တင်ပဲ သိတဲ့သူတွေက ချက်ချင်လို့ လှမ်းစကားပြောတာတောင် ကျွန်မ ပြန်မဖြေခဲ့လို့ပါပဲ။ သိချင်တာ တတ်ချင်တာတွေ၊ လေ့လာချင်တာတွေ
မေးရင်တော့ ကျွန်မ ပြန်ပြောခဲ့ပေမယ့် ထမင်းစားရေသောက် အလာပသလာပ ပြောတဲ့သူတွေကိုတော့ ကျွန်မ အချိန်မဖဲ့ခဲ့ပါဘူး။ ဒီတော့ ကျွန်မကို မေးကြပြီပေါ့။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ဒီဘလောဂ့်ကြောင့်ခုလက်ရှိ အလုပ်ရရှိခဲ့သလို အချိန်ပိုင်းအလုပ်တွေလည်း အွန်လိုင်းကနေရရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ပရဟိတလုပ်ငန်းအတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ အလှူအတန်းတွေ၊ လူတွေ ခင်မင်ပတ်သက်ခွင့်ရရှိခဲ့သလို
ကျွန်မအတွက် နည်းပေးလမ်းမှန်ပြုတဲ့သူတွေ၊ နည်းပညာဖလှယ်ခွင့်တွေလည်း ရရှိခံစား စံစားခဲ့ရပါတယ်။ သူများအတွက်တော့ မပြောတတ်ပေမယ့် ကျွန်မအတွက်တော့ အလွန်ပဲ အဖိုးတန်တဲ့ ဘလောဂ့်တစ်ခုလို့ ခုချိန်ထိ ယူဆထားမိပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကျွန်မဘလောဂ့်လေးကို မရေးတော့ဘူးလို့ တွေးခဲ့ပေမယ့် ဆက်လက်လုပ် ဆောင်နေဆဲဖြစ်နေပါတယ်။ ကျွန်မအတွက် အပျင်းပြေဆိုတာထက် လူအများ နည်းပညာ ဗဟုသုတ ရသ အစုံ ပေးစွမ်းစေချင်တာ ရင်ထဲက လာတဲ့အမှန်စကားတစ်ခုပါ။ လူတိုင်းကို ဖြစ်မြောက်စေချင်ပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်ပေးလိုက်လို့ ဖြစ်မြောက်သွားရင်လည်း ကိုယ့်ကိုယ် လှည့်မကြည့် ရင်လည်းနေပါစေ ကျွန်မ အပြုံးမပျက် မေတ္တာစေတနာ ၀ါသနာ အရင်းခံပြီး သင်ပြလမ်းညွှန်နေပါမယ်။ တကယ်လို့သာ သင်မှာ ဘလောဂ့်တစ်ခုမရှိသေးဘူးဆိုရင် ကမ္ဘာ့ရွာကြီးထဲမှာ အိမ်ခြေမရှိသေးတဲ့သူအဖြစ် ဆက်လက်ရပ်တည်နေသလို ဖြစ်မနေဘူးလား။ ဒီတော့ အချိန်ကို အကျိုးရှိအောင် အသုံးချရင်း မိတ်ဆွေလည်း ချက်နိုင်ပါစေလို့ ပြောရင်းနဲ့ ရွာကြီးထဲမှာ ကိုယ်ပိုင်အိမ်နဲ့ နေကြည့်ချင်လာတယ်ဆိုရင် အောက်က အရင်တင် ပြီးသား စာကြောင်းပိုစ့်လေးကိုလည်း ဆက်လက် ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်အိမ်လေးရှိလာရင် ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေ ခံစားရမလဲဆိုတာ သိချင်ရင်တော့ အိမ်လေးတစ်လုံးကို အမြန်ဆောက် ကြည့်လိုက်ပါလို့ ပြောချင်နေမိပါတော့တယ်။
ဘလော့ဂ်တွေ ဘယ်လောက် အရေးပါလာမလဲဆိုတာ နောင်တစ်ချိန်မှာ လူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ်ပိုင် ဘလောဂ့်တစ်ခုစီရှိလာကြမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲနော်။ ကျွန်မ တွေးမိတာပါ။အခု တစ်လော blog တွေ၊ wiki တွေ အပြင် ကိုယ်ပိုင်ဒိုမိန်းတွေနဲ့ အုပ်စုတွေ၊ website တွေ တိုးတက်များပြားလာတာကို အချိန်တိုအတွင်းမှာ တွေ့ရှိလာရပါပြီ။ ဒါတွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် လူငယ်လူရွယ်တွေ အချိန်ကို အလဟဿ မကုန်ဆုံးအောင် အသုံးချတတ်လာကြပြီလို့ မှန်းဆလို့ ရပါတယ်။ ဒါဟာ ဖြစ်လည်း ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ တိုးတက်နေတဲ့ ခေတ်အခြေအနေမှာ နည်းပညာတွေ တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့
အသစ်အသစ်တွေ ပေါ်ထွက်လာနေချိန်မှာ ကျွန်မတို့တစ်တွေဟာ ခေတ်နောက် ပြတ်ကျန်လို့မရပါဘူး။ မီဒီယာစတိုင်သစ်တွေနဲ့အတူ တတ်နိုင်သရွေ့ ရှေ့ကို အရောက်လှမ်းနိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြရမှာပါပဲ။ နောက်ပိုင်း blog တွေ များပြားလာတာနဲ့အမျှ အများရဲ့အမြင်မှာ ကွဲပြားခြားနားစွာ မြင်တတ်ဖို့လည်း လိုအပ်တယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။ blog တွေဟာ လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းအတွက် ရည်ရွယ်တာ မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာပါပဲ။
ကိုယ်ပိုင် ခံစားချက်၊ ကိုယ်ပိုင်တွေ့ရှိချက်၊ ကိုယ်ပိုင်စွမ်းဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူ အနုပညာတွေ၊ နည်းပညာ ဗဟုသုတတွေ၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး အားလုံး အားလုံး လက်လှမ်းမီသလောက် ၀ါသနာအရင်းခံပြီး ဖြန့်ဝေ နေကြတာဟာ အလွန်တရာ ၀မ်းသာမိပါတယ်။ ယာဉ်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းရှိသလို၊ လူမှာလည်း လူ့စည်းကမ်းရှိသလို ဘလောဂ့်တွေမှာလည်း ဘလောဂ့်စည်းကမ်းဆိုတာ ရှိပါတယ်။
ဘလောဂ့်ဂါတစ်ယောက်ဟာကိုယ်ဖန်တီးတဲ့ အနုပညာအတွက် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် တာဝန်ယူရပါတယ်။
မှန်ကန်တဲ့သတင်း၊ မှန်ကန်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်၊ မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာ ဒါတွေဟာ တိကျမှန်ကန်မှုရှိမှသာ ကိုယ့်ဘလောဂ့်မှာ တင်ပြကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ငါသာစေ သူ နာစေဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ လုပ်ဆောင်ခြင်းမျိုးက ရေရှည်မှာ တည်မြဲမှု မရှိရုံမျှမက ဘလောဂ့်ဂါ အများကိုလည်း ယုံကြည်မှု ကင်းမဲ့စေတဲ့ လုပ်ဆောင် ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘလောဂ့်ဂါတိုင်း နားလည်လက်ခံသဘောပေါက်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်အမြင် သူ့အမြင် ဖလှယ်ခြင်းဟာလည်း ကောင်းတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ အောင်မြင်တိုးတက်မယ့် တက်လှမ်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်ပ ဘလောဂ့်ဂါများ နေရာအနှံ့အပြားမှာ များပြားနေတာကို တွေ့ရှိခြင်းအားဖြင့် ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေလည်း ဒီလို မီဒီယာအသစ်တွေ အများအပြား တိုးတက်စေချင်တာ အမှန်ပါ။ ဘလောဂ့်ဂါအချင်းချင်း ရိုင်းပင်းကူညီပြီး ပြည်ပ မီဒီယာသမားတွေ ကိုယ့်ဝန်းကျင်အတွင်း မ၀င်လာနိုင်အောင် အားလုံးကြိုးစားကြစေချင်ပါတယ်။ ပြည်ပနိုင်ငံသား ဘလောဂ့်တွေကို လေ့လာမိသလောက် ဘလောဂ့်ဂါတွေရဲ့ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းကသာ ဘလောဂ့်တင်ခြင်းကို ဂျာနယ်လစ်ဇင်ရဲ့ ပုံစံသစ်တစ်မျိုးအဖြစ် ရှုမြင်ကြပြီး ကျန် ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးကတော့ ယင်းသို့ မယူဆပါဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ အဲ နောက်ပြီး မိမိတို့ဟာ တစ်ခါတစ်ရံမှာဖြစ်စေ၊ မကြာခဏဖြစ်စေ မိမိတို့သတင်းမှာ ဖော်ပြမယ့် အချက်အလက်တွေရဲ့ မှန်ကန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး စစ်ဆေးအတည်ပြုဖို့အတွက် အချိန်ပိုပေးပြီး လုပ်ကြတယ်လို့ ဆိုသူ အရေအတွက်ကတော့ ၅၆ ရာခိုင်နှုန်းမျှသာ ရှိပါတယ်။
ဒီတော့ ဘလောဂ့်ဆိုတာနဲ့ တစ်ခုထဲသော အကြောင်းအရာကို မမြင်စေချင်ပါဘူး။ ကိုယ့်ရေးသားချက်ကို ကိုယ်တာ ၀န်ယူရပါမယ်။ ဘလောဂ့်ဂါ တော်တော်များများ အင်း ပြောရရင်တော့ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာ သူတို့ရဲ့ သတင်းတွေကို အွန်လိုင်းတင်ရာမှာ သူတို့ရဲ့ အမည်ဝှက်ကိုသာ ဖော်ပြကြပါတယ်။ ဘလောဂ့်ဂါ တွေဟာ သတင်းရေးရာမှာ သူတို့ရဲ့ အမည်မှန်ကို မဖော်ပြတဲ့အတွက် တကယ်လို့ သတင်းမှားတွေ ပေးခဲ့ရင်လည်း သူတို့ကို ခြေရာခံနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ထိုအဖြစ်တွေကြောင့် တချို့ ဘလောဂ့်ဂါတွေ မှားယွင်းတဲ့ ကောလဟလ သတင်းတွေကို ဖြန့်ဝေလာမိတဲ့အခါ ကျန်ဘလောဂ့်ဂါများကိုပါ ထိခိုက်နစ်နာစေမှု ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အထင်မှား အမြင်မှားမှုတွေလည်း ဖြစ်လာနိုင်စရာ ရှိလာပါမယ်။
ဘာပဲပြောပြောနည်းပညာတွေ တိုးတက်ပြန့်ပွားလာတာနဲ့အမျှ လူကြီး လူငယ် လူရွယ်တွေအားလုံး နည်းပညာ ဗဟုသုတအမြင်တွေ နေရာတိုင်းမှာ ရရှိလာနိုင်မယ်ဆိုရင်၊ နားလည်မှုတွေ မှန်ကန်လာနိုင်မယ်ဆိုရင် ဘလောဂ့်တွေ ဘယ်လောက်အရေးပါလာမလဲ။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ စီးပွားရေး အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်
ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့ ပြောလို့ မရတော့ပါဘူး။
ဘလောဂ့်တွေဟာ ကျွန်မတို့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ အခြေခံ အဆောက်အအုံကို ဖျက်ဆီးပစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ တွေးထင်ချက်ဟာ ယေဘုယျအားဖြင့် ခိုင်လုံမှု မရှိဘဲ အယူအဆသဘောသက်သက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘလောဂ့်တွေကြောင့် ငုံ့လျှိုးနေတဲ့ အနုပညာ၊ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနိုင်မှု စွမ်းရည်၊ လူတိုင်း အရည်အချင်းရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ မိမိကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှု၊ ပညာတတ်ဝန်းကျင်တွေ အရာအားလုံး တိုးတက်များပြားလာတာနဲ့အမျှ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံး အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းမယ့် လူငယ်လူရွယ်တွေ မွေးထုတ်လာနိုင်ခဲ့ပြီး တိုးတက်အောင်မြင်သော လုပ်ဆောင်ချက် တွေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကို ရင်ဘောင်တန်းလာနိုင်မယ်လို့ ကျွန်မ မြင်မိပါတော့တယ်။
အခုအချိန် အတွက် မေးရမယ့် မေးခွန်းကတော့ ကျွန်မတို့အနေနဲ့ အများပြည်သူဆိုင်ရာလူသားအားလုံးအတွက် နည်းပညာတွေ၊ ပညာဗဟုသုတ ဖလှယ်မှုတွေကိုယ်စွမ်းရှိသလောက် ဘယ်လို ဖြန့်ဝေသွားမလဲဆိုတာပါပဲ။
ကဲ မောင်လေးလား အကိုလား မသိတဲ့ ကိုzox တစ်ယောက် ဒီလောက်ဆို
ကျေနပ်လောက်မယ်လို့ ထင်မိပါတယ်နော်။ တဂ်တာတွေများနေတော့ အလျင်မှီအောင်
နည်းနည်းနောက်ကျစွာ ရေးပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်လည်း တောင်းပန်ပါတယ်။
ကဲ မိတ်ဆွေ ကမ္ဘာ့ရွာကြီးထဲမှာ ရပ်တည်နေပြီး မပြည့်စုံသေးတဲ့
မခိုင့်တခိုင် အိမ်လေးတစ်လုံးကိုတော့ ကော့မန့်လေးနဲ့ အမိုးအကာလေး
ဖြည့်ပေးခဲ့ပေါ့နော်။ မိတ်ဆွေလည်း အိမ်တစ်လုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့
အန်တီနွေရဲ့ အိမ်လေးတစ်လုံးအတွက် ထောက်ပံ့မှုတစ်ခုလေးပါ။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Thursday, October 22, 2009 13 comments:
အကြောင်းအရာက: Tag ပိုစ့်, မျှဝေခြင်း, ဆောင်းပါး
နာမည်လေးတစ်ခုကို ရေးရမယ်ဆိုတော့ ရွှေမြန်မာဆိုတော့ ရကောက်ကို ရေးရမှာပေါ့
နေ့အိပ်မက်ရဲ့ တဂ်တဲ့ ပိုစ့်လေးကို မနည်းစဉ်းစားပြီး ရေးလိုက်ရတာနော်
ညီမလေး။ မရေးရင်လည်း စိတ်ဆိုးဦးမယ်။ ရေးဖို့ကလည်း ဘာရေးရမှန်းမသိ ရော
ခက်ပြီ မထူးတော့ဘူး ပေါက်ကရ ဖြစ်လည်း ဖြစ်ပါစေတော့ ရေးသာချလိုက်ပြီ
ဟုတ်သော်ရှိ မဟုတ်သော်ရှိပဲ။ ဖတ်ပေတော့။
ကောင်လေးတစ်ယောက်နာမည်… ရဲတိုက်(ခုတစ်လော အရိုက်များလာတယ်နော်။)
သင်ဝတ်တဲ့တစ်ခုခု….. ရဲမျက်မှန်(တပ်တော့တပ်တယ် ရဲမျက်မှန်ဆိုင်က မဟုတ်)
ရေချိုးခန်းထဲကတစ်ခုခု… ရေ(မရှိပဲ ချိုးလို့ဘယ်ရမလဲနော်)
နေရာတစ်ခု…. ရင်ခွင်(တောင့်တမိတာပြောတာပါ ဟိဟိ)
နောက်ကျရတဲ့အကြောင်းပြချက်… ရပ်စောင့်နေရလို့…. (လိုင်းကားကို ပြောတာပါ။ )
သင်ပြောတတ်တဲ့တစ်ခုခု.. ရော ခက်ပြီ(အဲလို ပြောတတ်တယ်ထင်တာပဲ)
ရုပ်ရှင်ကားနာမည်… ရွှေရောင်မိုးကောင်ကင်(မကြည့်တော့ မကြည့်ဖူးဘူး။ ရှိတယ်ထင်တာပဲ)
လမ်းတစ်လမ်းနာမည်…. ရောက်လမ်း(အသံထွက်နဲ့ဖတ် ဒါပဲ)
သီချင်းတစ်ပုဒ်ခေါင်းစဉ်…. ရတုအဆက်ဆက်(ဘယ်သူဆိုတာလည်း မမှတ်မိပါ။ နားပဲထောင်သည်)
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Sunday, October 18, 20092comments:
အကြောင်းအရာက: Tag ပိုစ့်
ညီမလေး ပန်းရင့်ရောင်အတွက် သီချင်းလက်ဆောင်နဲ့အတူ
မင်းအတွက် သံစဉ်တွေ ရှာဖွေရင်း...
မင်းအတွက် သီချင်းတွေ သီဖွဲ့ရင်း...
ယိုင်နဲ့နဲ့ သံစဉ်တွေနဲ့ မပီမသစကားလုံးတွေ
မင်းရင်ထဲမှာ ငါ့အတွက် နေရာရှာဖွေရင်း....
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Sunday, October 18, 20093comments:
အကြောင်းအရာက: Tag ပိုစ့်, ကဗျာ
ညီမလေး ပန်းရင့်ရောင် တဂ်တာကို ပြန်ဖြေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ညီမလေး တဂ်တာကတော့ ညည်းဖြစ်မိသော သီချင်းများဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးပါ။ ဒါပေမယ့် ညီမလေးရေ မမက သီချင်းဆိုတာထက် နားထောင်တာပဲလုပ်လေ့ရှိတဲ့အတွက် ခေါင်းစဉ်လေးကို နည်းနည်းပြောင်းလိုက်ရတဲ့အတွက် တောင်းပန်ပါတယ်နော်။ လူဆိုတာ ပင်ပန်းတဲ့အခါ စိတ်ကို လန်းဆန်းစေမယ့်အရာတစ်ခုကို ပြုလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ မမကတော့ အမြဲ စာဖတ်ဖို့ပဲ အားသန်ပါတယ်။ သီချင်းနားထောင်ပြီး ကော်ဖီသောက်ရင်း စာဖတ်ရတာကို အလွန်ပဲ ကြိုက်နှစ်သက်မိတယ်။ ဒါပေမဲ့ မျက်မှန်သမားဆိုတော့ အိမ်က သိပ်ပြီး စာဖတ်တာကို မကြိုက်တဲ့အတွက် ကွန်ပျူတာကိုင်တာပေါ့ ဟီး။ ပါဝါတွေလည်းတိုးလို့ တတ်နိုင်ဘူး။ ၀ါသနာကို မတားနဲ့ရှင် ဆိုသလို ဖြစ်နေပြီ။ ကွန်ပျူတာကိုင်ရင်းလည်း သီချင်းနားထောင်တယ်။ သီချင်းနားထောင်လွန်းလို့ နားဒုက္ခရောက်တာတောင် ခံစားခဲ့ရဖူးတယ်။ တော်တော်ဆိုးတဲ့ ခံစားမှုတစ်ခုပေါ့ ညီမလေးရ။ ဒါနဲ့ ဆေးရုံကို သွားပြပြီးမှ သက်သာသွားတာ နောက်ပိုင်း နားကြပ်နဲ့ သိပ်ပြီး နားမထောင်ဖြစ်တော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် အခု ပြန်နားထောင်နေပြန်ပြီ ဟိ။ တစ်ခါတလေတော့ သံစဉ်မမှန်တဲ့ အသံကြောင်နဲ့ ဆိုညည်းတတ်ပါတယ်။ အိမ်မှာ နားထောင်ရင်လည်း လူကြီးတွေ မကြိုက်တတ်တဲ့ အော်တယ်လို့ အမြဲပြောတဲ့ သီချင်းတွေ များတယ်လေ။ မမ အမြဲနားထောင်ဖြစ်တဲ့ သီချင်းတွေကတော့
၀ိုင်းစုခိုင်သိန်းရဲ့ အချစ်မမြင်ဆိုလား စာသားက (မချစ်ချင်ပါဘူး သတ်ချင်တာပဲ သိတယ်နော်....)
ညီမလေးလို တစ်စုံတစ်ယောက်ဆိုတာ မမရဲ့ဘ၀ထဲမှာ ခုထိမရှိသေးတဲ့အတွက် ဘယ်သူကို ဘယ်လိုလွမ်းရမှန်းကို မသိပဲ လွမ်းတိုင်း နားထောင်ဖြစ်တဲ့ သီချင်းကတော့
၀ိုင်ဝိုင်းရဲ့ လက်ခံမှာလား (မင်း စိတ်ဟာ ထိခိုက် မခံဘူးကွာxxx အားပေးသူ တစ်ယောက်လောက်တော့ ရှိနေမှာxxx သိမ်ငယ်စွာ တစ်ယောက်ထဲxxx သူစိမ်းသူများကြားမှာ စိတ်ညစ်နေမလား....)
နေနေရဲ့ ဖူးစာရှင် (ဘယ်လို ၀ဋ်ကြွေးများကြောင့်လဲxxx အဖော်မဲ့ ငါ့တစ်ယောက်ထဲ တစ်ခါမှ အသည်းလည်း မခွဲခဲ့ဖူးပါကွယ် xxx အကြင်နာကင်းမဲ့ စိတ်အားလည်းငယ် မြှားနတ်ရှင်ရယ် ဘာများမှားနေလဲxx နာကျင်ကြေမွခဲ့ချိန်များ ငိုကြွေးဖို့နေရာ ရင်ခွင်လေးတစ်ခု တိုးဝှေ့ဖို့ လိုတယ်xx ပြန်လည် နှလုံးသားကြွေးဆပ် ပေးအပ်ပါ့မယ် လွဲလို့နေဆဲ ကိုယ့်ဖူးစာရယ်xxx အတိတ်ဖူးစာရှင်ရယ် အိပ်နေသလားကွယ်xx အကြင်နာမှန်ရင် ဆုံဆည်းပါရစေသားxxx)
နောက်တစ်ပုဒ်က ကြိုးကြာရဲ့ အိပ်မက်မက်ခွင့်ရရုံနဲ့ ကျေနပ်ရသူပါ (အိပ်မက်မက်ခွင့်ရရုံနဲ့ ကျေနပ်ရသူပါxxx ဘာကြောင့်လဲကွယ် အတိတ်ကံလွဲ ဘာမှန်းမသိပါ ငါ့စိတ်ထဲ ငါ့ရဲ့ဘေးမှာ မင်းရှိရင် ကျေနပ်တယ်xxx)
ဇော်ပိုင်ရဲ့ ပြန်လာခဲ့ပါ (အချစ်အကြောင်း ငါတော့ နားမလည်xxx ကြုံလာတိုင်းလည်း အသိခက်ဆဲxx ရင်ထဲက ခံစားချက်ပါ )
ဆောင်းဦးလှိုင်ရဲ့အပိုဆု (ဘယ်တော့ ငါ့ကို ပစ်သွားမယ် ငါ မသိxxx ဘယ်တော့ ငါ့ကို ချစ်မိမလဲ ငါမသိxxx ဘယ်တော့ ငါ့ကို ပစ်သွားမယ် ငါမသိxx ပိုအော ချစ်မိတယ် လိုချင်ဆုံး မင်းဆီက မေတ္တာတရားပါxx)
နောက် နားထောင်ဖြစ်တာတွေက Lဆိုင်းဇီ သီချင်းတွေများတယ်။ မှတ်မိသလောက် ခေါင်းစဉ်တွေက
မကြာခင်မှာ ကြင်နာမယ်၊ မလွမ်းရဲသေးဘူးမောင်ရဲ့ ပြောရရင် အများကြီးပဲ။
များသောအားဖြင့် နားထောင်တာတွေက လေးဖြူ၊ အငဲ သီချင်းတွေများတယ်။ ဘလက်ဝိုး သီချင်းတွေလည်း နားထောင်ဖြစ်တယ်။
အကြိုက်ဆုံးနဲ့ ဆိုညည်းတာကတော့ လေးဖြူရဲ့ အိပ်မက်ကဗျာထဲက မမေ့နိုင်သီချင်းပဲ ညီမလေးရဲ့။
(ညလေး.... မှောင်မဲ တိမ်ညိုတွေကြား အလင်းပျောက်ကွယ်xxx ဒီလိုညမျိုး အိပ်လို့ပျော်အောင် လာပြီး ဘယ်သူကများ နှစ်သိမ့်မလဲxxx )
နောက် အိမ်မှာကော ရုံးမှာကော နာဖြစ်တဲ့တရားတော်က U Nyanissara ရဲ့ တရားတော်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ ဒီလောက်နဲ့ ကျေနပ်လောက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် တဂ်တဲ့ညီမလေး ပန်းရင့်ရောင်ရေ... နေ့အိပ်မက် တဂ်တာလည်း ရေးရဦးမယ် ဟင့်ဟင့် ဆိုးတဲ့ကလေးမတွေ ကိုယ့်အမ အေးဆေးနေတာကို မကြည့်ရက်ကြဘူးထင်တယ်။ ကဲ တော်ပြီနော် ညနေကို မိုင်စုဗူးအဖွဲ့နဲ့ ရွှေတိဂုံဘုရားကို တံမြက်စည်းလှည်းသွားရဦးမယ်ရှင့်။
ညီမလေးကိုလည်း ရွှေမြန်မာက မမယမင်းက အမြဲခင်မင်စွာ ကြိုဆိုလျှက်ပါနော်။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Saturday, October 17, 2009 1 comment:
ပိုက်ဆံတစ်ပြားမှ မကုန်ဘဲ ဒေါ်လာ ၆၅၀ တန် လက်ပ်တော့ကွန်ပျူတာရမယ်ဆိုပါလား
အိုင်တီစစ်တမ်း ကောက်ယူမည်၊ လူတိုင်းပါဝင်၍ ကံစမ်းမဲရယူနိုင်သည် ဆိုပဲ။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကွန်ပျူတာသုံးစွဲမှု အခြေအနေ၊ အင်တာနက် သုံးစွဲမှုအခြေအနေများကို လေ့လာရန်နှင့် အနာဂတ် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အိုင်စီတီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို သုံးသပ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက် (ကြာသပတေးနေ့)မှ စတင်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ တပ်မတော်ခန်းမ၌ ကျင်းပမည့် မြန်မာအိုင်စီတီပြပွဲ ၂၀၀၉ တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းရှင်အသင်းနှင့် Novel Light Media တို့ ပူးပေါင်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကွန်ပျူတာသုံးစွဲသူများထံမှ အိုင်တီအခြေအနေ သုံးသပ်ချက် စစ်တမ်းတစ်စောင်ကို ကောက်ယူမည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ အိုင်တီစစ်တမ်းတွင် ကွန်ပျူတာသုံးစွဲသူတစ်ဦး၏ ကွန်ပျူတာဟာဒ့်ဝဲ သုံးစွဲမှုအခြေအနေ၊ ဆော့ဖ်ဝဲသုံးစွဲမှု အခြေအနေ၊ အင်တာနက်အသုံးပြုမှု အခြေအနေများကို လေ့လာသွားမည်ဖြစ်သည်။
ပြပွဲလာ ပရိသတ်များအနေဖြင့် ပြပွဲခန်းမအ၀င်ဝ ညာဘက်ခြမ်းတွင်ရှိသော ကောင်တာတွင် Myanmar IT Exhibition 2009, IT Survey sheet ကို အခမဲ့တောင်းယူပြီး အဆိုပါပုံစံတွင် မေးထားသော အိုင်တီဆိုင်ရာ မေးခွန်းများကို ဖြည့်စွက်ကာ ပြန်လည်ပေးအပ်ရန် ဖြစ်သည်။ IT Survey sheet ဖြေဆိုသူတိုင်းသည် ပထမဆု ဒေါ်လာ ၆၅၀ တန် လက်ပ်တော့ကွန်ပျူတာတစ်လုံး၊ ဒုတိယဆု ဒေါ်လာ ၄၅၀ တန် ကွန်ပျူတာတစ်လုံး၊ တတိယဆုဒေါ်လာ ၃၀၀ တန် နက်ဘုတ်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနှင့် ကွန်ပျူတာဆက်စပ်ပစ္စည်းနှင့် အခြားဆုမဲပေါင်း ၃၀ ကျော်ကို ကံစမ်းခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ပြပွဲဝင်ကုမ္ပဏီများမှ ထပ်မံပံ့ပိုး ချီးမြှင့်သော ဆုမဲများကိုလည်း ပူးတွဲရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် IT Survey sheet ရယူပြီး ပြန်လည်ဖြည့်စွက်ပေးပို့သည့်အခါ ကံစမ်းမဲကူပွန်ကို ပြန်လည်တောင်းယူရန် ဖြစ်သည်ဆိုသည့် သတင်းထူး သတင်းကောင်းကို ရရှိပါတယ်။ ကဲ လက်မနှေးဖို့ အိုင်စီတီပြခန်းကို ချီတက်ကြပါစို့။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Thursday, October 15, 20093comments:
Posted In: BlogFest09 by admin on September 25, 2009
Blogfest.asia isafestival for bloggers in Asia. This is the region's 1st cross-border gathering for blogger community. Everyone is welcome to join the festival and meet hundreds of bloggers from the neighborhood community — Australia, China, Hong Kong, Iran, Korea, Japan, Malaysia, Mongolia, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam, etc.
The 3-day brainstorming and networking meet-up provides an unique opportunity to address "Change & Responsibility", in Asia perspective. Check out the latest program and register now!
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Wednesday, October 14, 2009 No comments:
ကဲ.... ဒီတော့ မိတ်ဆွေ
ရွှေတိဂုံဘုရားရင်ပြင်ပေါ်မှာ Fan Club Member များ နှင့် သူငယ်ချင်းများ ကုသိုလ်ယူကြမည် ~
Mysubo Fan Club Member နှင့် သူငယ်ချင်းများခင်ဗျာ …
ကျွန်တော်တို့ Mysuboo Donation Group အနေဖြင့် ယခင်စီစဉ်ထားသောေ၇ွှတိဂုံဘုရားပေါ်တွင် တံမြက်လှည်း (သို့) ဘုရားရင်ပြင် သန့်ရှင်းခြင်း အမှုတို့ကိုဆောင်ရွက်ပြီး ကုသိုလ် ယူမည့်အစီအစဉ်အား အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အချိန်တော်တော်ကြာကြာရွှေ့ဆိုင်းထားခဲ့ပါသည်။
ယခု member နှင့် သူငယ်ချင်းများအား အသိပေးလိုသည်မှာ၊ လာမည့် စနေနေ့ (17.10.09) မှစ၍ အပတ်စဉ် စနေနေ့တိုင်း ညနေ (၅) နာရီအချိန်မှာစ၍် ကျွန်တော်တို့ သွားရောက် ကုသိုလ်ပြုနိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။ သို့ပါ၍ member များနှင့် သူငယ်ချင်းများအား အတူတကွာ ပူးပေါင်းကုသိုလ် ယူစေချင်သည်။ ဘုရားပေါ်တွင် ကျွန်တော်တို့ စုရပ်ကို အမြဲ အရှေ့ဘက်မုဒ် ရှိ ဆောင်းတန်းတွင် ထားရှိမည်ဖြစ်ပြီး ညနေ (၅) နာရီမှစ၍ ကုသိုလ်ယူမည်ဖြစ်သည်။ သို့ပေမယ့် ပထမဦးဆုံး လိုက်ပါသူများ အဆင်ပြေစေရန် စုရပ်အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါနေရာအား လာပေးကြပါရန် လေးစားစွာဖြင့် အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
စုရပ်။ ။ မြေနီကုန်းရှီ ၊ ice berry café
အချိန် ။ ။ ညနေ ၄ နာရီ။
မှတ်ချက်။ ။ အသင်းတွက် တံမြက်စည်းလှူဒါန်းချင်သူများ ရှိပါက တစ်ချောင်းကို (၅၀၀) ကျပ်နှုန်းဖြင့်
Mysuboo Fan Club (Admin)
ကိုလိန် @ စိုင်းနောင်
Mysuboo Fan Club
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Tuesday, October 13, 2009 1 comment:
သင်ဘယ်နေရာမှာ ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ အတိတ်ဘ၀ကို ပြန်ကြည့်ချင်ရင် ကြည့်ပါ။ ဒါပေမဲ့ သတိ ရှိရမှာက အရေးကြီးဆုံး ဘ၀ကတော့ အခု သင် ရှင်သန် အသက်ရှင်နေတဲ့ဘ၀ပဲ ဖြစ်ပါတယ်......
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Monday, October 12, 2009 1 comment:
လင်းပြီး မမှောင်၊ အေးမြမေတ္တာ
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Saturday, October 10, 2009 1 comment:
BloggerGathering & Shirikhittara 2.0 Excursionခရီးစဉ်ကြီး
မနှစ်က မကျင်းပလိုက်ရသော ဘလောဂ်ဒေးအတွက် ဒီနှစ်တော့ ဘလောဂ်ဂါမောင်နှမတွေ တွေ့ဆုံပွဲအနေနဲ့ကော Shirikhittara 2.0 Excursion အနေနဲ့ပါ စုံညီစွာ တက်ရောက်ခဲ့ကြသော မောင်နှမများအားလုံးကို ရှေးဦးစွာ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောပါရစေ... ၂၉ ရက် ၈ လ ၂၀၀၉ ရက်နေ့မှာ ကန်တော်ကြီး မျှော်စင်ကျွန်းမှာ ခင်မင်ရင်းနှီးစွာနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးနောက် ၃၀ ရက် ၈ လ ၂၀၀၉ ညမှာ ပြည်မြို့ရှိ သရေခေတ္တရာ မြို့ဟောင်းသို့ လေ့လာရေးသွားကြဖို့ စုရပ်ဖြစ်တဲ့ မြေနီကုန်း ရွှေလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှေ့မှာ ည ၉ နာရီခွဲအရောက် ချိန်းဆိုထားခဲ့ကြပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မောင်နှမများ စုံညီစွာ လိုက်ပါမယ့်သူ ၄၁ ဦးလည်း myanmar blogger society (MBS) Logo နဲ့ Gathering & Shirikhittara 2.0 Excursion စာသားကပ်ထားတဲ့ ခရီးသွားယာဉ်နဲ့ ညပိုင်း ၁၀ နာရီ ၄၅ မိနစ်မှာ ရန်ကုန်မြို့ကနေ လေ့လာရေးခရီးစဉ်ကို စတင်ခဲ့ကြပါတော့တယ်။ အဲ ငှားထားတဲ့ကားနဲ့ လူဦးရေ မညီတဲ့အတွက် ကားချိန်းဖို့ ကားငှားရာ ဂိတ်ကို လှမ်းပြောကြည့်ပေမယ့် အဆင်မပြေပါဘူး။ ဒါနဲ့ မောင်နှမများ ပိုပြီး ချစ်ခင်စည်းလုံးမှု ရစေချင်လို့ပဲ ဆိုပြီး ယောက်ျားလေးအနည်းငယ်လောက်က မတ်တတ်ရပ်နဲ့ လိုက်ပါခဲ့ရပါတယ်။ ခရီးစဉ် စတင်တာနဲ့ တစ်ယောက်တစ်လက် ငဲ့ပြီး စီးလာခဲ့ကြတာ ပျော်စရာ အလွန်ကောင်းပါတယ်။ လမ်းတစ်လျှောက်လည်း မအိပ်ရပါဘူး။ အိပ်တာနဲ့ နားငြီးအောင် နိုးတော့တာပါပဲ။ တစ်လမ်းလုံးလည်း သီချင်းတွေ ဆိုကြ နောက်ကြ ပြောင်ကြနဲ့ ခရီးဆက်လာခဲ့ကြတာ လမ်းခုလတ် လက်ပံတန်းမြို့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ အချိန်အားဖြင့် ၃၀ ရက်နေ့ မနက် ၂ နာရီဝန်းကျင်ရှိနေပြီ ဖြစ်ပြီး ခရီးတစ်ထောက် ခဏရပ်နားခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကိစ္စ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စားချင်တာ မှာစားတဲ့သူနဲ့ တစ်မှေးမှကို မအိပ်စက်ခဲ့ရပါဘူး။ နာရီဝက်ခန့်အကြာမှာ လက်ပံတန်းမြို့ကနေ ခရီးဆက်ခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။
လမ်းမှာလည်း အိပ်မယ် ကြံလိုက်၊ ဟိုလူက နိုးလိုက် အော်လိုက် သားဖြိုးတို့၊ အရုပ်ကလေးတို့က ပိုဆိုးသေး၊ မျက်လုံး မပိတ်လိုက်နဲ့ ထအော်ပြီ။ ဒါနဲ့ ကြောင်တောင်တောင် မျက်လုံးနဲ့ မနက် ငါးနာရီခွဲကျော်ကျော်ခန့်မှာတော့ ပြည်မြို့ကို ရောက်ရှိပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း ထအော်ကြပါရော၊ Shirikhittara 2.0 Excursion လေ့လာရေးကားကြီးကတော့ ပြည်မြို့ လေးဆူဓာတ်ပျော် ရွှေဆံတော်စေတီတော်ကြီးရှေ့တွင် ငြိမ့်ခနဲ့ ထိုးရပ်သွားပါတော့တယ်။
ထို့နောက် ခြေလက်မျက်နှာသန့်စင်မှု ပြုကြပြီး၊ ရွှေဆံတော်စေတီတော်ပေါ် အတက်မှာ ပန်းများ အလုအယက်လာရောင်းတာကို ကိုယ်စီ ၀ယ်လှူကြနဲ့ မောင်နှမအားလုံး ပြုံးပျော်နေတာကို အာရုံမနက်ခင်းလေးမှာ တွေ့လိုက်ရတာဟာ တော်တော်ကြည်နူးဖို့ ကောင်းလှပါတယ်။ ကိုယ်စီ အပြုံးတွေနဲ့ ဘုရားခြေတော်ရင်းမှာ ပန်းလေးတွေကိုင်ပြီး တက်လာကြတာဟာ မြင်သူတစ်ကာတို့ရဲ့ ရင်ထဲမှာ ကြည်နူးအေးချမ်းမှုကို ဖြစ်မယ်လို့လည်း မြင်မိပါတယ်။ ရွှေဆံတော်စေတီတော်ရင်ပြင်ပေါ်ရောက်တော့ စေတီတော်ကို ဖူးမျှော်ခြင်း၊ ဓာတ်ပုံများ ရိုက်သူရိုက်နဲ့ အလွန်တရာမှ အေးချမ်းမိပါတယ်။ ဘုရားပေါ်ရောက်တော့ ရွှေဆံတော်ဘုရားမှာ ကြိုဆိုမယ့် ဂေါပကရုံးကို သွားကြတော့ နံနက် ၇ နာရီမှ နံနက်စာ စားရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဂေါပက လူကြီးလည်း မရောက်သေးတဲ့အကြောင်း ယောဂီအဖွဲ့တွေလည်း နံနက်စာကျွေးမည်ဖြစ်လို့ ခဏစောင့်ငံ့ပေးကြပါလို့ ပြောတာနဲ့ ဘုရားရှိခိုး ပုတီးစိတ် ဘုရားအာရုံပြုပြီး ဘုရားရင်ပြင်တော်ပေါ်မှာရှိသမျှ နေရာတွေ လှည့်လည်လျှောက်ကြည့်မိတယ်။ အရင်တုန်းက ခဏ ခဏ ရောက်ခဲ့ဖူးပေမယ့် ခုတစ်ချိန်နဲ့ မတူတဲ့ ခြားနားမှုများစွာနဲ့ ပျော်ရွှင်မိတာကို ခံစားရပါတယ်။
ထို့နောက် လေ့လာရေးခရီးစဉ်သို့ လိုက်ပါလာသူ MBS အဖွဲ့သားများကို ပြည်ရွှေဆံတော်ဘုရားကြီးရဲ့ ဂေါပကအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်တဲ့ ပြည် တက္ကသိုလ်က ပါမောက္ခချုပ် မြ၀င်း(ဒဿန)က နံနက်စာကို မသုံးဆောင်ခင်မှာ ပြည်ရွှေဆံတော်ဘုရားရဲ့သမိုင်းကြောင်း ပန်းဖလက်လေးတွေ လိုက်ကမ်းပြီး ရှင်းပြပါတယ်။
ပြည့်မြို့ရဲ့ လေးဆူဓာတ်ပျော် ရွှေဆံတော်စေတီတော်မြတ်ကြီး သမိုင်းအကျဉ်း
၁။ လေးဆူဓါတ်ပျော်ရွှေဆံတော်စေတီတော်မြတ်ကြီးသည် မြတ်စွာဘုရားသက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကပင် တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သော စေတီတော်မြတ်ကြီးဖြစ်ပါသည်။ `လေးဆူဓါတ်ပျော်´ ဟု ခေါ်ဆိုရခြင်းမှာ
(၁) ကကုသန်မြတ်စွာဘုရား၏ ဒုကုဋ်သင်္ကန်းတော်၊ (၂) ကောဏဂုံမြတ်စွာဘုရား၏ အံ့သကိုဋ်တော်၊
(၃) ကဿပမြတ်စွာဘုရား၏ ခါးပန်းတော်နှင့် (၄) ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား၏ ဆံတော်မြတ်လေးဆူ၊ မွေရှင်တော်မြတ်ရှစ်ဆူ၊ နိသီဒိုင်တော်တို့ကို ဌာပနာ၍ တည်ထားသောကြောင့် ခေါ်ဆိုရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
လေးဆူဓါတ်ပျော်ရွှေဆံတော်စေတီတော်မြတ်ကြီး တည်ထားသောတောင်တော်ကို `သုဒဿန´ တောင်တော်ဟု ခေါ်ပါသည်။ မြတ်စွာဘုရားနုစဉ်အခါ ဟင်္သာမင်း၊ ကြက်မင်း၊ ဖွတ်မင်း၊ ယုန်မင်း၊ ဖြစ်စဉ်က နေထိုင်ခဲ့သော တောင်တော်ဖြစ်ပါသည်။
၂။ လေးဆူဓါတ်ပျော်ရွှေဆံတော်စေတီတော်မြတ်ကြီး၏ ဒါယကာများမှာ အဇ္ဇိကနှင့် ဘလ္လိကကုန်သည်ညီနောင်၊ ဧရာပထနဂါးမင်း၊ သိကြားမင်း၊ ဗြဟ္မာမင်းတို့ဖြစ်ကြသည်။ မဟာသက္ကရာဇ် ၁၀၃-ခုနှစ်၊ တပေါင်းလဆန်း ၁၃ရက်နေ့တွင် စတင်တည်ထားရာ၊ ထိုနှစ် တပေါင်းလပြည့်နေ့တွင် ပြီးစီးသည်။ တည်ဦးစကဉာဏ်တော် ၇တောင်၊ အလျားအနံ၁၄တောင်ရှိ၍ စပါးစုသဏ္ဍာန်မြေစိုက်စေတီတော် ဖြစ်ပါသည်။
၃။ သာသနာနှစ် ၁၂၆-ခုနှစ် သရေခေတ္တရာပြည်ကို တည်ထောင်စိုးစံသော ဒွတ္တပေါင်မင်းကြီးသည် ဘ၀ဟောင်းက အဇ္ဇိကနှင့် ဘလ္လိကကုန်သည်ညီနောင်ဖြစ်ခဲ့ကြသော သားတော်ရဟန္တာ ၂-ပါးက ရှာဖွေပေးသဖြင့် စေတီတော်ကို ဖူးမြင်ရသောအခါ လွန်စွာကြည်ညိုခြင်းဖြစ်ပြီး စေတီတော်ကို ယခုဖူးတွေ့ရသည့် ပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်း ပြုပြင်တည်ထားခဲ့ပါသည်။
၄။ မြန်မာမင်းအဆက်ဆက်တို့သည် စေတီတော်ကြီးကို ကိုးကွယ်ကြပြီး ပြုပြင်ရန် လိုအပ်သည်တို့ကို ပြုပြင်ခဲ့ကြပါသည်။
သက္ကရာဇ် ၄၄၅-ခုနှစ်၊ (အေဒီ ၁၀၈၃ခုနှစ်)တွင် ပုဂံပြည့်ရှင် ကျန်စစ်သားမင်းကြီးသည် ဤစေတီတော်ကြီးကို ဖူးမျှော်ပြီး မိမိ၏ ဘ၀ဖြစ်စဉ်နှင့် စေတီတော်ကြီးသမိုင်းအကျဉ်းကို မွန်ဘာသာဖြင့် ကျောက်စာရေးထိုး၍ စေတီတော်မြတ်ကြီး၏ အလယ်ပစ္စယံ တနင်္ဂနွေထောင့်တွင် စိုက်ထူခဲ့ပါသည်။ ထိုကျောက်စာကို ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနက ကျောက်စာတိုက်ဆောက်လုပ်၍ ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။
၅။ အင်းဝခေတ်တွင် မြန်မာသမိုင်း၌ အရေးပါသောဖြစ်ရပ်တစ်ခုသည် လေးဆူဓါတ်ပျော်ရွှေဆံတော်စေတီတော် ရင်ပြင်တော်ပေါ်၌ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုဖြစ်ရပ်မှာ အခြားမဟုတ်။ အင်းဝဘုရင်မင်းခေါင်နှင့် မွန်ဘုရင်ရာဇာဓိရာဇ်တို့ သည် သက္ကရာဇ် ၇၆၇-ခုနှစ် တွင် စေတီတော် မြတ်ကြီး ရင်ပြင်တော်ပေါ်ဝယ် သစ္စာပြု၍ ငြိမ်းချမ်းရေးရယူခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
၆။ သက္ကရာဇ် ၁၁၁၆-ခုနှစ် ၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော် ၁၂ရက်နေ့တွင် အလောင်းမင်းတရားကြီးသည် ပြည်မြို့ကို မွန်တို့ လက်ဝယ်မှ အောင်မြင်စွာ သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါသည်။
အလောင်းမင်းတရားကြီးသည် ထိုနေ့ညနေ၌ပင် စေတီတော်မြတ်ရင်ပြင်တော်ပေါ်သို့တက်ရောက်ပြီး စေတီတော်ကြီးကို ဖူးမျှော်ရာတွင် လေးဆူဓါတ်ပျော်ရွှေဆံတော် စေတီတော်မြတ်ကြီး၌ မိမိကုသိုလ်တော် ရွှေထီးတော် တင်လှူလိုသော ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာ သက္ကရာဇ် ၁၁၁၆-ခုနှစ်၊ တပေါင်းလပြည့်နေ့တွင် ယခင်မွန်ဘုရင်တို့ တင်လှူခဲ့သော ထီးတော်ကို မဖယ်ရှားပဲ မြန်မာထီးတော်ကို ဆင့်၍ တင်လှူခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် လေးဆူဓါတ်ပျော်ရွှေဆံတော်စေတီတော်မြတ်ကြီးတွင် ထီးတော် ၂ဆင့် ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသို့ ထီးတော်နှစ်ဆင့်ရှိနေခြင်းသည် လေးဆူဓါတ်ပျော်ရွှေဆံတော်စေတီတော်မြတ်ကြီး၏ ထူးခြားချက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုထီးတော်၂ဆင့်ကို ပုံစံပြုလုပ်၍တင်လှူပူဇော်သော အစဉ်အလာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။
၇။ သက္ကရာဇ် ၁၂၂၀-ခုနှစ်၊ (ခရစ်နှစ် ၁၈၅၈ခုနှစ်)၊ ၀ါခေါင်လပြည့် ညနေ၃-နာရီတွင် ပြည့်မြို့၌ ပြင်းထန်သော မြေငလျင်လှုပ်မှုဖြစ်ခဲ့ရာ လေးဆူဓါတ်ပျော်ရွှေဆံတော် စေတီတော်မြတ်ကြီးသည် ခေါင်းလောင်းမှောက်သည့်အထိ ပြိုကျပျက်စီးခဲ့ပါသည်။ ပြည်မြို့ကုန်သည်ကြီး ဦးသာရွှဲ ဦးဆောင်သောအဖွဲ့သည် ရတနာပုံနေပြည်တော် မင်းတုန်းမင်းတရားကြီးထံသို့ သွားရောက်၍ အကျိုးအကြောင်းတင်ပြလျှောက်ထားရာ မင်းတုန်းမင်းတရားကြီးက ပြင်ဆင်ခွင့် စာချွန်တော်နှင့် အလှူတော်ငွေကျပ် (၂၀၀၀၀)နှစ်သောင်း ထည့်ဝင်လှူဒါန်းခဲ့သဖြင့် ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူအများ၏ ထည့်ဝင်ငွေများနှင့် စုပေါင်းကာ လေးဆူဓါတ်ပျော်ရွှေဆံတော် စေတီတော်မြတ်ကြီးကို ပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့သည်။
၈။ ခေတ်အဆက်ဆက်တွင် ရဟန်းရှင်လူပြည်သူတို့သည် လေးဆူဓါတ်ပျော်ရွှေဆံတော် စေတီတော်မြတ်ကြီးအရှည်တည်တံ့အောင် ပြုပြင်ရန် လိုအပ်သည့်အခါတိုင်း သဒ္ဓါထက်သန်စွာ ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့ကြသည်။
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၆၃-ခုနှစ်၊ တန်ခူးလဆန်း၁ရက်၊ (၁၃.၄.၂၀၀၂) ၊ စနေနေ့ညနေ(၄း၁၅)တွင် စနေထောင့်မှ ရုတ်တရက် လေပြင်းတိုက်ခတ်ရာ လေးဆူဓါတ်ပျော်ရွှေဆံတော် စေတီတော်မြတ်ကြီး၏ ထီးတော် ယိုယွင်းပျက်စီးသွားခဲ့ပါသည်။
ရဟန်းရှင်လူပြည်သူအများတို့သည် ၁၃၆၄-ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့(၂၁.၁၀.၂၀၀၂)၊ တနင်္လာနေ့တွင် ရွှေစင်ရွှေသားအတိပြီးသော ရွှေထီးတော်၊ ငှက်မြတ်နားတော်၊ စိန်ဖူးတော်တို့ကို အသစ်တစ်ဖန် ပြန်လည် တင်လှူပူဇော်ခဲ့ကြပါသည်။
၉။ လေးဆူဓါတ်ပျော်ရွှေဆံတော် စေတီတော်မြတ်ကြီးအား (၅)နှစ်တစ်ကြိမ် ရွှေသင်္ကန်းကပ်လှူဆက်ကပ်မြဲဖြစ်ရာ ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူအများတို့သည် ၁၃၆၇-ခုနှစ် ၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော် ၂ရက် (၁၅.၁.၂၀၀၆)၊ တနင်္ဂနွေနေ့မှစ၍ ရွှေသင်္ကန်းကပ်လှူရာ ၁၃၆၈ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော် ၁၄-ရက် (၂၆.၄.၂၀၀၆)ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ပြီးစီးအောင်မြင်ပါသည်။ ထူးခြားသည်မှာ ယခုတစ်ကြိမ် ရွှေသင်္ကန်းကပ်လှူသည်မှာ လုံးတော်ပြည့် ရွှေသင်္ကန်းကပ်လှူခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ယခုအခါ လေးဆူဓါတ်ပျော်ရွှေဆံတော် စေတီတော်မြတ်ကြီးသည် သုဒဿနတောင်တော်ထက်တွင် ရွှေတောင်ကြီးပမာ သပ္ပာယ်တည်ရှိ၍ ဗြဟ္မာနတ်လူ သုံးဘုံသူတို့၏ ပူဇော်အထူးကို ခံယူလျက်ရှိပါသည်။
ရှင်းပြတာကို နားထောင်ရင်းနဲ့ မနက်စာ ဧည့်ခံတဲ့ စမူဆာနဲ့ လက်ဖက်ရည်ကို သုံးဆောင်ပြီး ဘုရားကြီးရဲ့ အထင်ကရရှိတဲ့ ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားများကို ထပ်မံ လှည့်လည်ဖူးမြှော်ပြန်ပါတယ်။ အဲဒီကနေမှ ပြည်တစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ ရွှေဘုံသာမုနိစေတီတော်ကို ဖူးမြှော်ဖို့အတွက် န၀ဒေးတံတားကြီးကို ဖြတ်သန်းခဲ့ပါတော့တယ်။ နံနက် ၈ နာရီခွဲဝန်းကျင်လောက်မှာ ရွှေဘုံသာမုနိဘုရားကြီးကို ဖူးမြှော်ခဲ့ကြပါတယ်။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Sunday, October 04, 20093comments:
အကြောင်းအရာက: မှတ်တမ်း, အမှတ်တရ
ရွှေဘုံသာမုနိစေတော်မြတ်ကြီးကို ဖူးမြှော်ကြပြီးနောက် ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းနံဘေးတွင် ခဏအနားယူကြပြီး ပြည်မြို့ရှိ သရေခေတ္တရာမြို့၊ ရှေးဟောင်းပြတိုက်သို့ ဆက်လက်ထွက်ခွာ လေ့လာခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Sunday, October 04, 20092comments:
သရေခေတ္တရာမြို့ဟောင်းသည် ပြည်မြို့အရှေ့တောင်ဘက် ငါးမိုင်ခန့်အကွာတွင် တည်ရှိပါတယ်။ မြို့ဟောင်းရာသည် ဘဲဥပုံလည်းမက စက်ဝိုင်းပုံလည်းမကျသော အ၀န်းအ၀ိုင်းပုံသဏ္ဌာန်ရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။
အချို့သော ရောမနိုင်ငံတော်ဘုရင်များသည် ပြေးပွဲခုန်ပွဲများသို့ ရှုစားရန် ကြွရောက်တော်မူသည့်အခါတွင် ဦးရစ်များကို ဆင်မြန်းတော်မူတတ်ကြသည်။ သို့ရာတွင် ထို့သို့ဦးရစ်များကို ဆင်မြန်းခြင်းသည် ဘုရင်မင်းမြတ်တည်းဟူသော ရာထူးနှင့် မူလက မည်သို့မျှ သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ သို့ဖြစ်၍ ရောမဘုရင်များသည် နောင်အခါတွင် ဦးရစ်များကို မင်းတို့၏ အဆောင်အယောင်တစ်ခုအဖြစ် စတင်အသုံးပြုကြသောအခါ တိုင်းသူပြည်သားများက များစွာမနှစ်မြို့ကြချေ။ လူများသည် ဦးရစ်နှင့် သရဖူကို ရုတ်တရက် မခွဲခြားနိုင်ကြသော်လည်း စင်စစ်ထိုနှစ်ခုမှာ များစွာခြားနားလေသည်။ ထို့ကြောင့် သရဖူဟူ၍ ရှင်ဘုရင်တို့သာ ဆောင်းသော အလေ့မှာ အရှေ့တိုင်းမှ အတုယူခဲ့ကြောင်း ထင်ရှားပေသည်။ ရှေးခေတ်သုံး ဦးရစ်နှင့် ယခုခေတ် အသုံးပြုလျက်ရှိကြသော သရဖူများသည် တစ်ခုနှင့် တစ်ခု ပုံသဏ္ဌာန်ချင်း များစွာ မကွာခြားသည့်အကြောင်းမှာ ယခုခေတ်သရဖူများကို ရှေးခေတ်သုံးဦးရစ်၏ပုံသဏ္ဌာန်ကို ယူ၍ ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ဖြစ်လေသည်။
ထို့နောက် သရဖူကို ဘုရင်အာဏာပိုင်များသာ ဆောင်းရရိုးဖြစ်သော အစဉ်အလာသတ်မှတ်သောအခါ သရဖူများတွင် ဘုရင်များ မိဖုရားများ ဆောင်းသော သရဖူ၊ မင်းညီမင်းသားများဆောင်းသော သရဖူ၊ မြို့စားရွာစားများဆောင်းသောသရဖူ၊ စသည်ဖြင့် သရဖူ ပုံသဏ္ဌာန်အမျိုးမျိုးရှိလေသည်။ သရဖူအားလုံးတွင် ဘုရင်ဆောင်းသောသရဖူမှာ အဆင့်အတန်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်လေသည်။ မင်းညီမင်းသားမြို့စားရွာစားများကား ဘုရင်ဆောင်းသော သရဖူအောက် အဆင့်အတန်းနိမ့်သော သရဖူငယ်များကိုသာ ဆောင်းရလေသည်။ ယခုခေတ်တွင် အနောက်နိုင်ငံများ၌ အသုံးပြုနေကြသော မြို့စား(ဒျုဘွဲ့ရများ) ဆောင်းသော သရဖူငယ်မှာ ရွှေနဖူးစီးပေါ်တွင် ရွှေဖြင့်ပြီးသော စထရော်ဗယ်ရီရွက် ရှစ်ရွက်ကို တပ်ဆင်ထားလေသည်။ မားကွစ်ဘွဲ့ရသူများဆောင်းသော သရဖူငယ်သည် နဖူးစီးပေါ်တွင် ထိုစထရော်ဗယ်ရီရွက်မျိုး လေးရွက်သာ ပါ၍ တစ်ရွက်နှင့် တစ်ရွက်စပ်ကြားတွင် ပုလဲလုံးများကို တပ်ဆင်ထားသည်။ မားကွစ်အောက်နိမ့်သော အားဘွဲ့ရများဆောင်းသော သရဖူများမှာ ရွှေနဖူးစည်းပေါ်တွင် ရောင်ခြည်တန်းရှစ်သွယ်ထိုးထွက်နေ၍ ရောင်ခြည်တမ်းတစ်ခုနှင့် တစ်ခုစပ်ကြားတွင် ရွှေဖြင့်ပြီးသော စထရော်ဗယ်ရီရွက်တစ်ရွက်စီတပ်ဆင်ထားသည်။ စထရော်ဗယ်ရီရွက်၏အမြင့်မှာ ရောင်ခြည်တန်း၏အမြင့်လေးပုံတစ်ပုံရှိသည်။ ဗိုင်းကောင့်ဘွဲ့ရသူများဆောင်းသော သရဖူငယ်တွင်ကား ရွှေနဖူးစီးတွင် ပုလဲလုံး၁၆လုံးတပ်ဆင်ထားသည်။ ဗယ်ရွန်ဘွဲ့ရသူများ၏ သရဖူငယ်၌မူ ပုလဲလုံးခြောင်းလုံး တပ်ဆင်ထားလေသည်။
သရေခေတ္တရာမြို့ဟောင်းသည် ပြည်မြို့အရှေ့တောင်ဘက် ငါးမိုင်ခန့်အကွာတွင် တည်ရှိသည်။ မြို့ဟောင်းရာသည် ဘဲဥပုံလည်းမက စက်ဝိုင်းပုံလည်းမကျသော အ၀န်းအ၀ိုင်းပုံသဏ္ဌာန်ရှိ၍ တောင်မြောက်နှစ်မိုင်ခွဲခန့်နှင့် အရှေ့အနောက်နှစ်မိုင်ခန့် ကျယ်ဝန်းလေသည်။ ရန်ကုန်မှ ပြည်မြို့သို့ သွားသော မီးရထားလမ်းသည် သရေခေတ္တရာမြို့ဟောင်းကို အရှေ့တောင်မှ အနောက်မြောက်သို့ ဖြတ်သန်းသွား၍ ပြည်မှ ပေါက်ခေါင်းသို့ သွားသော မော်တော်ကားလမ်းကို မြောက်ဘက်မြို့ရှိးပေါ်သို့ ဖြတ်၍ ပြုလုပ်ထားသည်။ မြို့ဟောင်းအတွင်း၌ ယခုအခါ ရွာငယ်အများအပြားရှိ၍ မြောက်ဘက်ပိုင်းကမူ လယ်ကွက်များပြည့်နှက်နေ၏။ မှော်ဇာဘူတာရုံသည် မြို့ဟောင်း၏ ဗဟိုနေရာမှ အရှေ့မြောက်ယွန်းယွန်းတွင် တည်ရှိသည်။ ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံများသည် မြို့တွင်း၌သာမက မြို့ပြင်၌လည်း အနှံ့အပြားကျန်နေသေးရာ သရေခေတ္တရာထွန်းကားစဉ်က ထင်ရှားခဲ့သော မြို့ပတ်ဝန်းကျင် နယ်နမိတ်မှာ ကျုံးနှင့် မြို့ရိုးပတ်ရံသည် မြို့တွင်းထက် လေးဆခန့်မျှ ကျယ်ဝန်းကြောင်း သိနိုင်လေသည်။
မြို့တွင်းအလယ်ဗဟိုလောက်တွင် နန်းတော်ကုန်းဟုခေါ်သော စတုဂံအုတ်ရိုးကာရံထားသည့် ကုန်းမို့မို့ကို တွေ့နိုင်သေးသည်။ တောင်ဘက်မြို့ရိုး၏ အပြင်ဖက်တွင် အရှေ့ပျူတိုက်၊ အနောက်ပျူတိုက်၊ ဗိဿနိုးမြို့နှင့် ဗိဿနိုးမိဖုရားသင်္ချိုင်း ရာတို့ရှိလေသည်။ မှန်နန်းရာဇ၀င်အဆိုအားဖြင့် သရေခေတ္တရာမြို့ကို သာသနာနှစ်တစ်ရာ့တစ်ခုနှစ်တွင် ဒွတ်တပေါင်(ဒွတတ္တပေါင်) မင်း ပဌမတည်ထောင်သည်ဟု ဆိုသည်။ မြို့တည်နန်းတည်ရာ၌ ကူညီစောင့်ရှောက်သော သူမြတ်ခုနှစ်ဦးမှာ ဂ၀ံပတေ့၊ ရသေ့၊ သိကြား၊ နဂါး၊ ဂဠုန်၊ စန္ဒီ၊ ပရမီသွာတို့ဖြစ်ကြသည်။ တကောင်းမင်းယောက်ဖတော် ရှင်ရသေ့သီတင်းသုံးသည်ကို အကြောင်းပြု၍ သရေခေတ္တရာမြို့ကို ရသေ့မြို့ဟု နောင်မှတွင်၏။ ပြည်မြို့ရွှေဆံတော်ဘုရားခြေရင်း၌တွေ့ရသော ကျန်စစ်သားမင်း၏ မွန်ကျောက်စာအလိုအားဖြင့် သရေခေတ္တရာမြို့ကို ပဌမတည်ထောင်သော မင်းမှာ ဗိဿနိုးရသေ့ကြီးဖြစ်၏။ တည်ထောင်သောနှစ်မှာ မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံယူတော်မူသောနှစ် သာသနာနှစ်၁နှစ်ဖြစ်၏။ ရသေ့ကြီးကို ကူညီစောင့်ရှောက်ကြသော သူမြတ်တို့မှာ ဂ၀ံပတေ့၊ သိကြား၊ ၀ိသကြုံနတ်သားနှင့် နဂါးမင်းတို့ဖြစ်သည်ဟု ဆို၏။ ကျန်စစ်သားမင်း၏ကျောက်စာများအရ သရေခေတ္တရာကို သိသီတ်၊ (ဂြီက္ခတ်၊ ဂြီကွေတြာ) ဟူ၍လည်း ခေါ်တွင်ကြောင်း သိရလေသည်။ ရှေးဟောင်းသုတေသန အထောက်အထားများ အရမှာမူ သရေခေတ္တရာမြို့သည် ခရစ်နှစ် ငါးရာစုမှ ရှစ်ရာစုအတွင်း၌ ထွန်းကားကြောင်းသာ သိရှိရသေးရာ ထိုသို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် စတင်တည်ထောင်ရသော ကာလကို ထည့်သွင်းခန့်မှန်းသည်ဆိုပါမူ ခရစ်နှစ် နှစ်ရာစုထက် စောနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။
သရေခေတ္တရာတွင် ပျူလူမျိုး အများအပြားနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ယင်းတို့ကို တိရ်စုလ်ဟူ၍လည်း အမည်တွင်ခဲ့ကြောင်း ကျန်စစ်သား မွန်ကျောက်စာတစ်ချပ်အရ ယူဆရသည်။ ပျူတို့ဒေသဟု ခေါ်ဆိုအပ်သော သရေခေတ္တရာနှင့် ဟန်လင်းမြို့ဟောင်းတို့မှ အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းအက္ခရာဖြင့် ရေးထိုးထားသောကျောက်စာများကို ထောက်၍ ပျူဘာသာနှင့် ပျူစာ သုံးနှုန်းရေးသားခဲ့ကြသည်ဟု ယူဆမှတ်သားကြရသည်။ သရေခေတ္တရာခေတ်၌ ရေးထိုးသော ပျူစာများမှာ အုတ်ချပ်များပေါ် ဂဏန်းနှင့် အမှတ်အသားများ၊ အုတ်ပုံနှိပ်ဘုရားများ(အုတ်ခွက်)ဘုရားနောက်ကျောမှ စာများ၊ ကျောက်စာများနှင့် ကျောက်အရိုးအိုးများပေါ်မှ စာတမ်းတို့ဖြစ်ကြသည်။ ယင်းတို့အနက် အချို့မှာ မှေးမှိန်ပျက်စီးနေ၍ အတိအကျဖတ်ရှုမရနိုင်ခြင်း၊ အချို့မှာ စာကြောင်းတိုကလေးများသာဖြစ်၍ အောကာင်းအရာမဖော်နိုင်ခြင်းနှင့် အချို့မှာ ပျူဝေါဟာရကျယ်ပြန့်စွာ မသိရှိသေးသဖြင့် အဓိပ္ပာယ်တိမ်မြုပ်နေခြင်းတို့ကြောင့် သမိုင်းအထောက်အထားရသင့်သလောက် မရနိုင်ချေ။
ဘုရားကြီးဘုရားအနီးမှ တွေ့ရှိရသော ကျောက်အရိုးအိုးလေးလုံးတို့၏ပတ်လည်တွင် ပျူစာတစ်ကြောင်းစီ ရေးထိုးပါရှိလေသည်။ ယင်းကျောက်စာများအရ သရေခေတ္တရာ၌ ၀ိကြမမင်းဆက် စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ သူရိယ၀ိကြမ၊ ဟရိဝိကြမနှင့် သိဟ၀ိကြမတို့၏ နတ်ရွာစံနှစ်နှင့် သတ်တော်များပါရှိရာတွင် နန်းစံနှစ်ကို မြန်မာကောဇာနှစ်အတိုင်းမှတ်ယူ တွက်ဆပါက ခရစ်နှစ်၆၈၈၊ ၆၉၅နှင့် ၇၁၈ ခုနှစ်တို့တွင် အသီးသီးနတ်ရွာစံကြသည်ဟု သိရှိနိုင်၏။ အရိုးအိုးစာတမ်းတစ်ခုမှာ သူရိယ၀ိကြမ၏ ဆွေမျိုး ကွယ်လွန်သည့်နှစ် ရေးထိုးထားလေရာ စာတမ်းလေးရပ်စလုံး ပေါင်းရုံးတွက်ဆပါက ၀ိကြမမင်းဆက်သည် ခရစ်နှစ် ၆၇၃မှ ၇၁၈ ခုနှစ်အထိ အုပ်စိုးသည်ဟု ဆိုရပေမည်။ ထိုမင်းဆက်သည် သရေခေတ္တရာတည်ထောင်စက အုပ်စိုးသည့်မင်းဆက် ဟုတ်မဟုတ်ကိုမူ မသိသာချေ။ နတ်ရွာစံသက္ကရာဇ်များကို အတည်ပြုမှတ်ယူရပါက ထိုမင်းများထက် ရှေးကျသောမင်းများ ရှိခဲ့ဦးမည်ဟု မှန်းဆရပေသည်။ ၀ိကြမမင်းတို့၏ ဘွဲ့အမည်များရှေ့၌ ``တ္ဒးဗံး´´ ဟူသော ဂုဏ်ပုဒ်ပါရှိလေရာ ယင်းဂုဏ်ပုဒ်ကို မင်းကြီးဟူသော အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်ကြောင်း အခြားကျောက်စာများမှ အထောက်အထားတို့ နှင့် ယှဉ်၍ သိသာနိုင်လေသည်။ ဒွတ္တဗောင် ဟူသောအမည်မှာ`တ္ဒးဗံး´ မှ ရွေ့လျောလာသော ဝေါဟာရဖြစ်ဖွယ်ရာရှိသောကြောင့် သမိုင်းလာ ဒွတ္တဗောင်ဆိုသည်မှာ ပုဂ္ဂလိကဘွဲ့မည် မဖြစ်နိုင်ချေ ဟု ယူဆရ၏။ ၀ိကြမမင်းဆက်သည် ပျူမင်းများဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ် အိန္ဒိယအနွယ်များဖြစ်သည်ကို အတိအကျမသိနိုင်ချေ။ နှောင်းခေတ်မြန်မာမင်းများသည် ပါဠိဘွဲ့မည်များခံယူကြသကဲ့သို့ ပျူမင်းများက အိန္ဒိယဘွဲ့မည်ခံယူခဲ့ကြဟန် ရှိကြောင်း စဉ်းစားရန်ရှိသည်။
၀ိကြမမင်းဆက်အပြင် ၀ါရ်မန်မင်းတို့ကိုလည်း ကမ္ပည်းစာများ၌ တွေ့ရသေး၏။ ထိုဝါရ်မန်မင်းတို့၏ အမည်များသည် အာရှ အရှေ့တောင်ဘက် နယ်တစ်လွှား၌ အတော်ပင်ထင်ရှားသည်။ သရေခေတ္တရာမြို့တွင်း ခင်ဘကုန်းမှ ရရှိသော ငွေဗောဓိမဏ္ဍိုင်ပလ္လင်ပတ်လည်၌ ဆင်းတုတော်ရုပ်ကြွပုံ လေးဆူအောက်တွင် ပျူအက္ခရာပျူဘာသာဖြင့် စာတမ်းတစ်ခု ရေးထိုးလျက်ပါရှိရာ ထိုစာတမ်းတွင် ကုသိုလ်ရှင်ဂြီပြဘုဝါရ်မနှင့် ဂြီပြဘုဒေ၀ီ အမည်များကို တွေ့ရှိရသည်။
သရေခေတ္တရာမြို့ဟောင်းတစ်နေရာ ဖိုးခေါင်ကန်ကုန်းမှ တွေ့ရှိရသော မဏိတော် ကျိုးနေသည့် ကျောက်ဆင်းတုတစ်ဆူ၏ စမ္မခဏ်ပတ်လည်တွင် ပျူဘာသာနှင့် သက္ကတဘာသာရောစပ်ပြီး ရေးထိုးမှတ်သားလျက် ပါရှိရာ ဖတ်ရှုရနိုင်သမျှ စာကြောင်းများ၏ အဓိပ္ပာယ်ချူပ်မှာ ဇယစန္ဒြ၀ါရ်မန်နှင့် ဟရိဝိကြမ မင်းသား ညီနောင်နှစ်ပါး တို့သည် တစ်နေ့တည်းတွင် မြို့နှစ်မြို့တည်ကြောင်း၊ ထိုညီနောင်နှစ်ပါးတို့သည် ဂူဟဒီပအမည်ရှိသော ရဟန်းကြီး၏ အဆုံးအမ သြ၀ါဒကို ခံယူ၍တစ်ဥိးနှင့် တစ်ဦးချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာ နေထိုင်ကြကြောင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုမြို့များ၏ အမည်နှင့် အကျယ်အ၀န်းကိုမူ မသိရချေ။
ပျူနိုင်ငံ၏မြို့တော်ဖြစ်သော သရေခေတ္တရာသည် အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းယဉ်ကျေးမှု လွှမ်းမိုးမှုကို အများဆုံးခံယူခံခဲ့ရသည်။ အထူးသဖြင့် အယူဝါဒဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးမှုတွင် လွှမ်းမိုးမှုအထင်ရှားဆုံးဖြစ်သည်။ ဟိန္ဒိူအယူဝါဒ၊ မဟာယာနနှင့် ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓအယူဝါဒတို့သည် အပြိုင်အဆိုင်ထွန်းကားခဲ့ကြောင်း အထောက်အထားများစွာ တွေ့ရလေသည်။ မြို့တွင်း မြို့ပြင်၌ ဗိသုကာလက်ရာများဖြစ်သော ဗုဒ္ဓအယူဝါဒဆိုင်ရာ စေတီပုထိုးနှင့် ဂူဘုရားများတည်ရှိခဲ့ကြသည်နှင့် အမျှ အနုပညာလက်ရာမြောက်သော ကျောက်ဆစ်ရုပ်ကြွဆင်းတုများ နှင့် အုတ်ပုံနှိပ်ရုပ်ကြွဆင်းတုများကိုလည်း အမြောက်အများထုလုပ်ပူဇော်ကြသည်။ ထင်ရှားသော မြေစိုက်အုတ်စေတီများမှာ မြို့ရိုးအပြင်ဘက်ရှိ ဘောဘောကြီးဘုရား၊ ဘုရားကြီးနှင့် ဘုရားမာတို့ဖြစ်ကြသည်။ ဂူဘုရားများအနက် လေးမျက်နှာ၊ ဘဲဘဲနှင့် ဈေးဂူနှစ်ဆူတို့မှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ လက်ရာများဖြစ်ကြသည်။ သာသနာအဆောက်အဦးပေါင်းများစွာမှာ ကာလကြာမြင့်၍ ပြိုပျက်ပြီးနောက် အုတ်ကုန်းများအတိဖြစ်နေရာ ယင်းတို့ကို ရှင်းလင်းတူးဖော်ရှာဖွေရာ၌ သာသနိက ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများ ပေါ်ထွက်လေ့ရှိသည်။ ထိုအနက် အုတ်ခွက်ခေါ်သော ပုံနှိပ်အုတ်ချပ်ဆင်းတု အမြောက်အမြားကို အနှံအပြားတွေ့ရှိရသည်။ ထိုအုတ်ခွက်တို့၏ မျက်နှာဖက်တွင် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကို လည်းကောင်း၊ ဗောဓိသတ်ဘုရားလောင်းပုံကိုလည်းကောင်း ထုလုပ်ထား၍ အချို့တို့တွင် ရှေးဟောင်းနာဂရီ အက္ခရာဖြင့် `ယေဓမ္မာ ဟေတု ပြဘ၀ါ´ အစရှိသော ဂါထာ ရေးထိုးပုံနှိပ်ပါရှိ၏။ အချို့အုတ်ခွက်၏ ကျောဖက်တွင် ပျူဘာသာဖြင့် စာတမ်းတိုတိုအနည်းငယ်ပါရှိလေ့ရှိသည်။
သရေခေတ္တရာတွင် ဗုဒ္ဓအယူဝါဒထွန်းကားခဲ့ကြောင်း လက်ရေးအထောက်အထားများကိုလည်းတွေ့ရ၏။ ၁၈၉၇ ခုနှစ်က သရေခေတ္တရာမြို့ဟောင်း၏ တောင်ဖက် ခုနစ်မိုင်ခန့်အကွာရှိ မောင်ကန်(သို့မဟုတ် လယ်ပေါ်ရွာ)မှ ရှေးဟောင်းစာ အရေးအသားပါရှိသော ရွှေချပ်လွှာနှစ်လွှာကို တွေ့ရှိရသည်။ ထိုရွှေချပ်လွှာနှစ်လွှာသည် စာသုံးကြောင်းရေး ပါဠိတော် ရွှေပေစာများဖြစ်ကြ၏။ အက္ခရာ အရေးအသားမှာ အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းမှ အက္ခရာများဖြစ်၍ စာသားတို့မှာ ၀ိနည်းမဟာဝါပါဠိတော်လာ ယေဓမ္မာ ဟေတုပ္ပဘ၀ါ အစချီသည့် ဂါထာကို အစပျိုး၍ ဒီဃနိကာယ်ပါဠိတော်၊ မဇ္ဈမနိကာယ်ပါဠိတော်၊ အဘိဓမ္မာပိဋကတ်ဝိဘင်းပါဠိတော် စသည်တို့မှ ကောက်နုတ်ချက်တို့ကို ဆက်လက်ရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၁၉၁၀ ခုနှစ် ပြည့်နှစ်တွင် ဘောဘောကြီးဘုရားခြေရင်း မြေကြီးများရှင်းလင်းရာ၌ တွေ့ရှိရသော သုံးပိုင်းကျိုး ကျောက်ချပ်ငယ်တစ်ခုမှာ အဘိဓမ္မာဝိဘင်းပါဠိတော်လာ ဗုဒ္ဓပါဝစနများဖြစ်ကြောင်း သိရလေသည်။ ၁၉၂၆ခုနှစ်တွင် ကုလားကန်ကုန်းရွာအနီး မောင်ခင်ဘလုပ်သော တောင်ယာနှင့် ကပ်နေသည့် အုတ်ကုန်းဟောင်းမှ တူးဖော်ရရှိသည့် ရွှေချပ်လွှာ၂၀ ချပ်မှာလည်း ပဋိစ္စ သမုပ္ပါဒ ဒေသနာ အစရှိသော ပါဠိပိဋကတ်တော်မှ ကောက်နုတ်ချက်ကိုးခုပါရှိလေသည်။
ဗြဟ္မဏ(ဟိန္ဒူ) အယူဝါဒဆိုင်ရာ ကျောက်ဆစ်လက်ရာများမှာ များသောအားဖြင့် ဗိဿနိုးနတ်ရုပ်များ ဖြစ်လေသည်။
သရေခေတ္တရာတွ် ရွှေဆင်းတု၊ ကြေးဆင်းတု၊ ငွေဆင်းတု၊ ငွေစေတီ စသော အယူဝါဒဆိုင်ရာ ၀တ္ထုပစ္စည်းများကို သာမက အနုပညာလက်ရာပြောင်မြောက်သော ၀တ္ထုပစ္စည်း အမျိုးမျိုးကိုလည်း ပြုလုပ်သည်ကို တွေ့ရှိရ၏။ လေးထပ်ပြင်ဘုရား အနီးမှလည်းကောင်း၊ ဆင်မ ကိုးဝန်တင်ကုန်းနှုင့် မုန့်သည်မကုန်းတို့မှ လည်းကောင်း ဖော်ထုတ်ရရှိသည့် ကျောက်ပလ္လင်အပိုင်းအစများမှာ ကြာဖတ်ကြာလွှာများ၊ မှန်ကူကွက်များနှင့် အမွမ်းအပြောက်တို့ဖြင့် အဆန်းတကြယ်ထုလုပ်ထားလေသည်။ တံကဲများ၊ သပိတ်များ၊ အရိုးအိုးများ၊ ဌာပနာတိုက်ဖုံးသည့် ကျောက်ပြားများနှင့် ခြင်္သေ့ရုပ်များတွင်လည်း ကျောက်ဆစ်လက်ရာထူးချွန်ပုံကို တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ရွံ့စေးကို မီးဖုတ်၍ ပြီးစေသော ရုပ်လုံးရုပ်ကြွများကိုလည်း လူရုပ်၊ ဘီလူးရုပ်၊ တိရိစ္ဆာန်ရုပ်၊ ကြာပန်းဖော်သော အုတ်တိုင်များအသွင် ဖန်တီးပြုလုပ်ကြလေသည်။
အယူဝါဒဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးမှုမှအပ ပျူလူမျိုးတို့၏ နေထိုင်ဝတ်စားဆင်ယင်မှု ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ယဉ်ကျေးမှုသာဓကများကိုလည်း အတော်အသင့် ထုတ်ဖော်တွေ့ရှိရသည်။ ကျောက်မျက်ရတနာတို့ဖြင့်ပြီးသော လည်ဆွဲပုတီးများ၊ ငွေရေသောက်ဖလားများ၊ ငွေကွမ်းအစ်များ၊ ငွေနံ့သာဗူးများ၊ ငွေကြာပန်းများ၊ လိပ်ပြာရုပ်၊ ဟင်္သာရုပ်၊ ရွှေလက်စွပ်၊ ငွေလက်စွပ်များစသည်တို့ကို ထောက်ရှု၍ သရေခေတ္တ၇ာ၏ စည်ပင်ဝပြောမှုနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားမှုကို သိသာလေသည်။ ပျူလူမျိုးတို့သည် သေဆုံးသည့်အခါ မီးသင်္ဂြိုဟ်သည့် အလေ့အထရှိကြ၏။ မီးကျွမ်းပြီးသော အရိုးစများနှင့် ပြာတို့ကို မြေအိုးများတွင် ထည့်သွင်း၍ ထိုအရိုးအိုးတို့ကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် မြှုပ်နှံ့လေ့ရှိကြသည်။ သာမန်အရပ်သူ အရပ်သားများအတွက် မြေအိုးများကို အသုံးပြု၍ မင်းစိုးရာဇာတို့အတွက် ကျောက်အိုးများကို အသုံးပြုကြောင်းလည်း သိသာသည်။ ပျူဒင်္ဂါးများဟု ခေါ်ဝေါ်သော အမှတ်လက္ခဏာများ ခတ်နှိပ်ထားသည့် ငွေပြားဝိုင်းများကိုလည်း သရေခေတ္တရာမြို့ဟောင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် တွေ့ရှိရ၏။ အမှတ်လက္ခဏာများမှာ သီရိဝစ္ဆပုံ၊ နေ၊ လနှင့် နက္ခတ်များပုံ၊ စကြာပုံ၊ ၀ရဇိန်လက်နက်ပုံ၊ သမုဒ္ဒရာပုံ၊ စသည်တို့ဖြစ်၏။ ယင်းဒင်္ဂါးများမှာ ကျပ်ပြားအရွယ်၊ ငါးမူးစေ့အရွယ်၊ မတ်စေ့အရွယ်များ ဖြစ်ရာ ငွေကြေးအဖြစ် အသုံးပြုဖွယ်ရာ ရှိသည့်အပြင် အန္တရာယ်ကင်း အဆောင်အယောင်အဖြစ် လည်ဆွဲဆင်ယင်ကြောင်း သိသာလေသည်။
သရေခေတ္တရာမြို့ဟောင်းမှတစ်ဆင့် ဘောဘောကြီးဘုရားသို့လည်း သွားရောက်လေ့လာခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။ မသိတာတွေ သိရှိရပြီး ဒီလို မောင်နှမတစ်စု စုစုစည်းစည်းတစ်ခါဖူးမျှ သွားရောက်ဖူးခြင်းမရှိသော်လည်း စည်းလုံးညီညွတ်ပြီး တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ကူညီရိုင်းပင်းစွာ သွားရောက်ရ၍လည်း အလွန်ပျော်ရွှင်ကြည်နူးမိပါတယ်။ သမိုင်းကြောင်းတွေပါ ထည့်ရေးထားလို့ ဘောဘောကြီးတို့ ဘဲဘဲလေးတို့ ဘုရားအကြောင်းတွေ ဆက်လက်ရေးသားချင်သော်လည်း နေရာအခက်အခဲကြောင့် မတင်ပြတော့ပါဘူး။ နောင်မှ သမိုင်းကြောင်းများကို ဆက်လက်ရေးပြပါဦးမယ်။ အဲဒီမှတစ်ဆင့် ထိုခေတ်က အရိုးအိုးများနဲ့ သင်္ဂြိုလ်ကြသည့် ရှေးဟောင်းသင်္ချိုင်းများကိုလည်း ထပ်မံ သွားရောက်လေ့လာကြပြန်ပါတယ်။ နေက ပူပူ လျှောက်လိုက်ရတဲ့ ဘုရားတစ်ဆူနဲ့တစ်ဆူကြား ၁၅ မိနစ်လောက် လျှောက်ရတယ်။ လမ်းကတော့ မြေနီလမ်းကျဉ်းမှာ နွားလှည်းရာတွေနဲ့လမ်းဆိုတော့ ညီတဲ့နေရာ ညီပြီး မညီတဲ့နေရာ မညီဖြစ်နေတာပေါ့။ ဒါပေမယ့်လည်း တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် စကြ နောက်ကြနဲ့ တစ်နေရာပြီး တစ်နေရာ လေ့လာမှတ်သားရတာဟာ အတော်ကို ဗဟုသုတအစုံရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီကြားထဲ ညီလင်းဆက်တို့တွေ ရှေးခေတ်က အင်းကြင်းကျောက်လား ဘုရင်တွေ သုံးခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဆိုပြီး လမ်းမှာ တူးစရာမပါ ဘာမပါနဲ့ လေ့လာဖို့ တူးယူခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။ ပြီးတော့ လိုက်စနေပြန်တယ်။ ဒီကျောက်တုံးကို ကိုင်လိုက်ရင် ဆုတောင်းပြည့်တယ်တဲ့ သားဖြိုးက ပြောပြီး အတင်းကိုင်ခိုင်းပါလေရော။ ကျွန်မကတော့ အေးပါ မင်းတို့သာ ဆုတောင်းပြည့်အောင် သယ်ပြီး ကိုင်လာခဲ့လို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ်။
ထို့နောက်တွင်တော့ MBS အဖွဲ့သားများဟာ ပြည်မြို့မှ ပြန်လည်ထွက်ခွာလာခဲ့ကြပြီး ရွှေတောင်မြို့သို့ရောက်သောအခါ ရွှေနတ်တောင်ဘုရားကို ၀င်ရောက်ဖူးမြှော်ကြပြန်ပါတယ်။
ရွှေနတ်တောင်ဘုရားကြီးအကြောင်းကတော့ ပြည်ခရိုင် ရွှေတောင်မြို့နယ်ရှိ ရွှေနတ်တောင်ဘုရားသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထင်ရှား၍ တန်ခိုးကြီးဘုရားစေတီတော်တို့တွင် တစ်ဆူအပါအ၀င် ဖြစ်တယ်။ ရွှေနတ်တောင် ဘုရားသည် ရွှေတောင်မြို့တောင်ဖက် လေးမိုင်အကွာ ဒေ၀ါဂီရီခေါ် ရွှေနတ်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်တွင် တည်ရှိပြီး စေတီတော်ဆိုင်ရာ သမိုင်းဟောင်း၊ သမိုင်းလတ်များအပြင် ပါဠိဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော သမိုင်းသစ် စသည်ဖြင့် အထင်အရှားရှိပါသည်။ သမိုင်းအဆိုအရ မြတ်စွာဘုရား သခင်သည် သဗ္ဗညုတ ရွှေဥာဏ်တော်ကို ရတော်မူပြီးနောက် တစ်နှစ်မြောက်ဖြစ်သော သက္ကရာဇ် ၁၀၄ ခုနှစ်တွင် ရာဇဂြိုဟ်ပြည်ဝေဠုဝန်ကျောင်းတိုက်မှ ယခု ရွှေနတ်တောင် ဘုရားတည်ရာ ဒေ၀ါဂီရိတောင်သို့ အရံသံဃာမပါ ကိုယ်တော်တစ်ပါးတည်းသာလျှင် တောင့်စောင့်ကြီးနတ်ကြီးအသွင်ဖြင့် ကြွရောက်တော်မူသည်။ ထိုကာလက ယင်းတောင်ကြီး၏ အနီးရှိ ယခု ရွှေတောင်မြို့ နေရာဖြစ်သော ကဉ္စန ဂီရိ နိဂုံးသူ နိဂုံးသားတို့သည် ဘာသာအလိုက် စရိုက်အားလျော်စွာ နတ်ကိုးကွယ်ကြရာ ထိုတောင်ကြီးပေါ်၌ နတ်ကွန်းဆောက်၍ တပေါင်းလတိုင်း ထိုတောင်စောင့်နတ်ကြီးကို ဆည်းကပ် ပသတင်မြှောက် ပူဇော်ကြသည်။
ဒေ၀ါဂီရိတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ ဘုရားရှင်ကြွချီတော်မူသည့်ကာလ နတ်ဗြဟ္မာတို့လည်း ပူဇော်ရန် အသီးသီး ရောက်ရှိလာကြကုန်သည်။ ထိုအခါ တောင်အလုံးသည် ဘုရားရှင်၏ ရောင်ခြည်တော်တို့ဖြင့် တလျှပ်လျှပ် ထွန်းပ၍ နေလေသည်။ ယင်းသို့ အလျှံအ၀ါ တောက်ပပုံကို မြင်ရသော နိဂုံးသူနိဂုံးသားတို့သည် တအံ့တသြဖြစ်ကာ နောက်တစ်နေ့ နံနက်တွင် တောင်သို့တက်၍ ကြည့်ကြရာ သိကြားမင်းခင်းအပ်သော ပလ္လင်ညောင်စောင်း၌ နတ်သားအသွင် ဘုရားရှင်ကို ဖူးတွေ့ရသောအခါ သူတို့ ကိုးကွယ်သော နတ်မင်း ကိုယ်ထင်ပြသည်ဟု ယူဆကြကုန်သည်။ ဘုရားသခင်အား နတ်ကြီးအမှတ်ဖြင့် ရှိခိုးပူဇော်ကြ၍ ဘုရားသခင် ဟောတော်မူသော တရားကို နာယူကြသည်တွင် အချို့သော ပရိသတ်သည် သရဏဂုံ သုံးပါးနှင့် တကွ ငါးပါးသီလ မြဲကြကုန်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ခုနှစ်ရက်ပါတ်လုံး တရားဒေသနာများ ဟောတော်မူပြီးနောက် ရှစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌ နိဂုံးသူနိဂုံးသားတို့ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ရန် ဘုရားရှင် ကိုယ်စား နတ်သားအသွင်ဖြင့် နိမ္မိတရုပ်ပွားတော်ကို ထားတော်မူခဲ့ကာ ရာဇဂြိုဟ်သို့ ပြန်ကြွတော်မူသည်။ နိဂုံးသူနိဂုံးသားတို့သည် ရုပ်ပွားတော်ကို ပျက်ပြားဆုတ်ယုတ်ခြင်း မရှိစေရန် အင်္ဂတေအုတ်ရိုးတို့ဖြင့် ပုထိုးစေတီငုံ၍ တည်လေသည်။ စေတီတည်ကြရာတွင် နေ့တွင် လူတို့က တစ်ရစ်တည်၍ ညဉ့်တွင် နတ်တို့က တစ်ရစ်တက်တည်သည်ဟု အဆိုရှိသည်။ ထို့ကြောင့် သမိုင်းရင်း၌ `လူနတ် နှစ်လီ၊ တရစ်စီ၊ စေတီရွှေနတ်တောင်´ ဟုဆိုသည်။ စေတီတော် ဘုရားပွဲကိုလည်း နိဂုံးသူနိဂုံးသားတို့သည် ရှေးဦးမဆွ က်ျးပပြုလုပ်မြဲဖြစ်သည့် အတိုင်း နှစ်စဉ် တပေါင်းလ၌ ကျင်းပကြရာ ယုခုခေတ်တိုင်ပင်ဖြစ်သည်။ နတ်ကြိးနေရာတောင်တွင် ရွှေတောင်၊ ရွှေတုံးကြီးကဲ့သို့ အရောင်အ၀ါများ တဖိတ်ဖိတ် တောက်သည်ကို အစွဲပြု၍ ရွှေနတ်တောင်ဟု တွင်ရာမှ ယင်းတောင်ပေါ်တွင် တည်ထားသော ဘုရားသည် ရွှေနတ်တောင်ဘုရားဟု ကျော်ကြားခဲ့လေသည်။
ရွှေနတ်တောင်ဘုရားကို ဒွတ္ထပေါင်မင်းကြီးမှ အစ မင်းအပေါင်းတို့သည် ဆက်လက် ပြုပြင်ကိုးကွယ်ကြသည်။
ဒွတ္ထပေါင်မင်းကြီး လက်ထက်တွင် မိဖုရားနှစ်ပါး ဖြစ်ကုန်သော ပိဿနိုးနှင့် စန္ဒာဒေ၀ီ တို့သည် ပျက်စီးယိုယွင်းနေသော ရွှေနတ်တောင် ဘုရားကို အုတ်အင်္ဂတေများ ရှင်းလင်းပြီးနောက် ဘုရားရှင်၏ ဓါတ်တော်ပေါင်း ၁၈၂ဆူကို ရတနာကြုတ်ဖြင့် ထည့်ကာ ဌာပနာ၍ ရွှေစေတီတစ်ထပ် ငွေစေတီတစ်ထပ် မွမ်းမံပြီးလျှင် အုတ်ရိုးစေတီ15တောင်အမြင့် တည်သည်။ ဒွတ္တပေါင်မင်းကြီးကလည်း စေတီတော်ပြိးစီးသော အခါ နေထွက်နေ၀င်အခါတွင် စေတီတော်အရိပ်ထွက်သမျှ ဌာနကို ဘုရားမြေဖြစ်စေ၊ ဤနယ်မြေမှ ထွက်သမျှ ဌာနကို ဘုရားမြေဖြစ်စေ၊ ဤနယ်မြေမှ ထွက်သမျှ အခွန်ကို စေတီတော်၌ ဆွမ်းတော်ဝတ်၊ ဆီမီးဝတ် ဖြစ်စေ ဟု လှူ၍ တပေါင်းလတိုင်း ပွဲလမ်းသဘင် ဆင်ယင်ကျင်းပ ပူဇော်သည်။ ထို့နောက် ပုဂံပြည် တရုတ်ပြေးမင်း၏သားတော် ပြည်စားသီဟသူသည် ခမည်းတော် မှာထားချက်အရ ခမည်းတော်လက်စွပ်ကို ရောင်းချ၍ ရွှေနတ်တောင်စေတီတော်ကို ထပ်မံပြုပြင်ရာ ဥာဏ်တော် ၄၄ တောင် မြင့်လေသည်။ တောင်ငူဘုရင် တပင်ရွှေထီးလက်ထက်တွင် လည်း ကိုယ်တော် လုံးပတ်ပြည့် ရွှေသင်္ကန်းကပ်လှူတော်မူသည်။ ထို့နောက် ကုန်းဘောင်ခေတ် ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက် သားတော်အိမ်ရှေ့မင်းသည် ရခိုင်ကို အောင်၍ ပြန်လာသည်တွင် ရွှေနတ်တောင်ဘုရားအား ဖူးမြော်၍ ကိုယ်လုံးပြည့်ရွှေသင်္ကန်းကပ်ခဲ့သည်။ ကုန်းတော်ရင်ပြင်ဝယ် တင့်တယ်ထူးဆန်း ခြူးပန်းခြူးနွယ် အသွယ်သွယ်သော ရတနာတို့ဖြင့် ချယ်လှယ်အပ်သော ရွှေပြဿဒ်တော်ကိုလည်းကောင်း၊ စောင်းတန်းလှေကားများစွာသော အရုဏ်ခံတန်ဆောင်းတုိ့ကိုလည်းကောင်း ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းတော်မူသည်။ ယင်းသို့ မင်းအဆက်ဆက် ပြုပြင်ပူဇော်ခဲ့ရာ ယခု အခါ စေတီတော်သည် ထီးတော်မပါ ဥာဏ်တော် ၆၄တောင်ရှိသည်။ ထီးတော်ပါမူ အတောင်၈၀မြင့်သည်။ စေတီတော်၏ ၀န်းကျင်ပတ်လည်တွင် စေတီရံ ၁၇ဆူနှင့် ရွှေပန်းခိုင်ကြိး၁၅ခိုင်ရှိသည်။ ဘုရားကုန်းတော်ပေါ်၌ ကြေးခေါင်းလောင်းပေါင်း ၂၁လုံး၊ ထီးတိုင်ပေါင်း ၁၄ခုနှင့် ဘုရားဖူးပရိသတ်တို့ နားနေရန် သုံးထပ် ဇရပ်ကြီးနှင့် တကွ ဇရပ် စုစုပေါင်း ၁၅ခုရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ဗြိတိသျှလက်အောက်၌ ရှိစဉ် အိန္ဒိယနိုင်ငံ နှင့် ခွဲရေးတွဲရေး ပြဿနာ ပေါ်ပေါက်လာရာ ၁၉၃၇ခုနှစ် ဧပြီလ၁ရက်နေ့တွင် ခွဲရေးအောင်မြင်သည်ကို အမှတ်ရစိမ့်သောငှာ ဘုရားကုန်းတော်ပေါ်၌ပင် ကျောက်စာတိုင် စိုက်ထူထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ စေတီတော်ကုန်း၏ တောင်ဖက်တွင် နှစ်ကျိပ် ရှစ်ဆူ ရုပ်ပွားတော်များ တန်ဆောင်းရှိ၍ ယင်းသို့ သွားရာလမ်းတွင် ၀င်္ကပါတောင်လမ်းရှိသည်။
ထို့ပြင် ဒွတ္တပေါင်မင်းကြီး လက်ထက် အလယ်နန်း ပိဿနိုးမိဖုရားသည် ရှင်မဟာယသမထေရ် ဟောကြားတော်မူသော တေမိဇာတ်တော်ကို ကြည်ညိုလှသဖြင့် တေမိဇာတ်၌ ပါရှိသည့် ကာသိကရာဇ်တိုင်း ဗာရာဏသီပြည်သို့ သွား၍ တေမိမင်းသား ရဟန်းပြုလုပ်သည့် တိုင်အောင်သော အဖြစ်အပျက် နေရာထိုင်ခင်းတို့ကို ရှုမြင်လိုသည့် ချင်ခြင်း ပြင်းပြစွာ ဖြစ်၏။ မိဖုရား၏ ဆန္ဒကို ပြည့်ဝစေရန် ကဉ္စနာဂီရိခေါ်ရွှေတောင်မြို့ကို ဗာရာဏသီမြို့၊ ယင်းမြို့၏ အနီးဝန်းကျင်ကို ကာသိတိုင်းအဖြစ် စီရင်၍ မိဖုရားအား လိုက်လံ ပြသသည်ဟု ဆိုလေသည်။
ထို့ကြောင့် ရွှေနတ်တောင်၏ အနီးဝန်းကျင်တွင် မိဖုရားကြီးလှည့်လည်ကြည့်ရှုစဉ်က တေမိမင်းသားအား မြေမြှုပ်ရန် တွင်းတူးသည့်နေရာဟု ပြသရာ ဖြစ်သော တွင်းတောင်အရပ်၊ ရထားရပ်ရာအရပ်ဖြစ်သော ရပ်တော်မူအရပ် (ယခု မှတ်တော်မူအရပ်)၊ မင်းသားရထားမှ ဆင်း၍ အားစမ်းအံ့သောငှာ ရထားကို မွှေ့၍ လည်စေသောဌာနဟု ပြသည့်အရပ်ဖြစ်သော ယခုအခေါ် မွေလယ်ရပ်၊ တေမိမင်း၏ ခမည်းတော် မယ်တော်တို့လိုက်လာ၍ ရသေ့ရဟန်းပြုကာ နေထိုင်ရာ ဌာနဟု ပြသသည့်အရပ်ကို ခမည်းတော် သင်္ခမ်း၊ မယ်တော် သင်္ခမ်းဟုတွင်သော သင်္ခမ်းကြီးတောင် စသည်တို့သည် ယခုတိုင်ရှိသေးသည်။ သင်္ခမ်းကြီးတောင်တွင်လည်း ဒွတ္တပေါင်မင်းကြီး မိဖုရား ပိဿနိုးနှင့် စန္ဒာဒေ၀ီတို့က ဓာတ်တော်ဌာပနာ၍ တည်ထားသော သင်္ခမ်းကြီးစေတီလည်း တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ရွှေနတ်တောင်မှာ ဘုရားအတွက် ပြုပြင်မွမ်းမံများကို လုပ်အားပေးကြသော အနီးအနားမှ ရွာများက လူများအား သာကူကြိုပြီး တိုက်နေကြတာကို တွေ့ရှိရပြီး ဂေါပကမှ အတင်းဖိတ်သဖြင့် ၀င်ပြီး ငတ်တီးကျ အဲ ၀င်ရောက် အားနာပါးနာနဲ့ ခေါင်းမဖော်တမ်း သောက်ကြသေးတယ်။ ကျွန်မတော့ သိပ်မသောက်နိုင်ဘူး ထန်းလျက်များပြီး အတော်ချိုလို့ တစ်ဇွန်းနှစ်ဇွန်းပဲ သောက်ခဲ့လိုက်တော့တယ်။ ရွှေနတ်တောင်ဘုရားမှအပြန် လမ်းခရီးတွင် ခဏအနားယူ အပန်းဖြေခဲ့ကြပါသေးတယ်။
ရေပြာလှိုင်းစားသောက်ဆိုင်ရောက်တော့ ညနေစောင်းအချိန်ဖြစ်နေပြီး မစားသေးခင် ဆော့ကြ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အမှတ်တရလဲလှယ်ခဲ့ကြတယ်။ တစ်ဆက်တည်း ကျွန်မ ရရှိခဲ့တဲ့ လက်ဆောင်က ဂျူဝဿန်ရဲ့ လက်ဆောင်ပစ္စည်းအရုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဂျူဝဿန် မောင်လေးရေ... ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်...
ထို့နောက် ည ၉ နာရီဝန်းကျင်ခန့်မှာ ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာလာခဲ့ကြပါတယ်။ ကားပေါ်တွင် ဘလောဂ့်ဂါအချင်းချင်း တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မိတ်ဆက်ခြင်း၊ ဘလောဂ်ရေးရခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်များကို ဖလှယ်ဆွေးနွေးကြပြီး ရှေ့ကို ဘယ်လိုဆက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း၊ တစ်ယောက်က ပြောရင် မည်သူမဆို မေးချင်တဲ့မေးခွန်း မေးကြရတာ အတော်ကို သဘောကျဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင် အချစ်မဲ့ဂီတာအလှည့်မှာ သူဟာ အချစ်မဲ့နေတဲ့အတွက် အချစ်မဲ့ဂီတာလို့ ဘလောဂ်နာမည်ပေးထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ တစ်ယောက်က ထမေးပါတယ်။ တကယ်လို့ အချစ်ရှိလာခဲ့ရင်ကော ဘလောဂ့်နာမည်ပြောင်းမှာလား မေးတော့ ဟုတ်ကဲ့ တကယ်လို့ အချစ်ရှိလာခဲ့ရင် ဘလောဂ်နာမည်ကို အချစ်နက်ဂီတာဆိုပြီး ပြန်ပြောင်းပါမယ်ပြောတော့ တစ်ကားလုံးဝိုင်းရယ်ကြရပါသေးတယ်။ အရေးထဲ ကိုယ့်အလှည့်မရောက်သေးတာကို ပြောချင်နေတဲ့ ဂျူဝဿန်ကလည်း ဘေးကနေပြီး ငါ့အလှည့်ရောက်ရင် ဘလောဂ်စလုပ်ခဲ့တဲ့နှစ် မေးရင် လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ ရာစုနှစ်ကလို့ ပြောရင်ကောင်းမလားလို့ ရွတ်နေပြန်ပါရော။ တကယ် ရယ်ရတယ်။ မိတ်ဆက်တာ မပြီးသေးခင် ပေါင်းတည်မြို့ကို ၀င်လာတော့ ပေါင်းတည်စွယ်တော်ဘုရားပွဲရှိလို့ ကားခဏရပ်ပြီး နာရီဝက်ခန့် ဖူးမြှော်ခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။ ကြုံတောင့်ကြုံခဲပွဲတွေလို့ ပြောရပါမယ်။ ည ဆယ့်တစ်နာရီဝန်းကျင်မှာ ရန်ကုန်သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာလာခဲ့ကြပြီး လမ်းခရီး ခဏရပ်နား ညလယ်စာစားကြ၊ ကျန်းမာရေးကိစ္စပြုလုပ်ကြနဲ့ နောက် ပညာများ ဖလှယ်ခြင်း၊ ဝေဖန်ဆွေးနွေးခြင်း အတွေ့အကြုံများ မျှဝေခြင်းနဲ့ ကိုလိန်နဲ့ ညီလင်းဆက်က သရဲခြောက်တာ ကြုံဖူးခဲ့ကြရတဲ့အကြောင်းများကို ကားပေါ်မှာ ပြောပြနေတုန်း ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုအပေါ်က ကျောပိုးအိတ်ကြီး သူ့အပေါ်ကို ပြုတ်ကျလို့ ထအော်တာလည်း တကယ့်ကို ငိုအားထက် ရယ်အားသန်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ သြဂုတ် ၃၁ ရက်နေ့ နံနက် ၄ နာရီခွဲအချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့ စုရပ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ Blogger Gathering & Shirikhitara 2.0 Excursion ခရီးစဉ်ကြီးလည်း အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးခဲ့ပါတော့တယ်။
ဒီခရီးစဉ်ကြီးမှာ တစ်ခါမှ မမြင်ဖူး မတွေ့ဖူးသေးတဲ့ ဘလောဂ်ဂါမောင်နှမများအားလုံးကို တွေ့ဆုံခဲ့ကြရခြင်း၊ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး မောင်ရင်းနှမများသဖွယ် စည်းလုံးညီညွတ်ပြီး ငယ်ပေါင်းကြီးဖော်များသဖွယ် ခင်မင်ရင်းနှီးစွာဖြင့် ခရီးစဉ်တစ်လျှောက် အေးအတူ ပူအမျှ လက်တွဲခဲ့ကြလို့လည်း ဒီခရီးစဉ်ကြီးဟာ အောင်မြင်မှုများစွာနဲ့အတူ ပြီးဆုံးခဲ့တယ်လို့ ခံစားမိပါတယ်။ နောင်ကိုလည်း ဒီလိုပဲ အတူသွားရောက်လေ့လာနိုင်ကြစေဖို့ ကျွန်မ အမြဲမျှော်လင့်နေမိပါတော့တယ်။
ကျွန်မ ပြန်လာကတည်းက ရေးချင်ပေမယ့် အချိန်မအားတာရယ်၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် ခုမှ ရေးသားလိုက်ရတာကို ခွင့်လွှတ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ဆောင်းပါးနည်းနည်းရှည်သွားတဲ့အတွက် စာဖတ်သူကိုလည်း အလွန်တရာမှ အားနာမိပါတယ်။ ရေးစရာတွေက ကျန်ရှိနေပေမယ့် အတိုချုပ်နဲ့ သမိုင်းကြောင်းလေးတွေပါ ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခေါက်သွားရင် လိုက်ဖြစ်အောင် လိုက်စေချင်ပါတယ်နော်။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Sunday, October 04, 2009 1 comment:
အကြောင်းအရာက: ဓါတ်ပုံ, မှတ်တမ်း, အမှတ်တရ
၃၊ ၁၀၊ ၂၀၀၉ ရက်နေ့သည် မြန်မာများရဲ့ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ (အဘိဓမ္မာနေ့)
သီတင်းကျွတ်လသည် မြန်မာလများတွင် ခုနစ်လမြောက်ဖြစ်ပြီး
မိုးရာသီကုန်လုချိန်ဖြစ်ကာ စက်တင်ဘာလနှင့် အောက်တိုဘာလမှာ ကျရောက်ပါတယ်။
ဂေါတမရှင်တော်ဘုရားသည် မယ်တော်မိနတ်သားအား တာဝတိံသာနတ်ပြည်၌
အဘိဓမ္မာတရားတော်ကို ၀ါတွင်းသုံးလပတ် ဟောကြားတော်မူပြီး
သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့၌ လူ့ပြည်သို့ ပြန်လည်ကြွချီတော်မူပါတယ်။
သိကြားမင်းက ရွှေစောင်းတန်း၊ ငွေစောင်းတန်း၊ ပတ္တမြားစောင်းတန်းတို့ကို
တင့်တယ်စွာ အလယ်ဗဟိုပတ္တမြားစောင်းတန်းမှ သက်ဆင်းကြွမြန်းတော်မူပါတော့တယ်။
နတ်အပေါင်းက လယ်ယာရွှေစောင်းတန်း၊ ဗြဟ္မာကြီးများက လက်ဝဲငွေစောင်းတန်းမှ
ယင်းပူဇော်ပွဲကြီးကို အစွဲပြုလို့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ရာသီပွဲတော်အဖြစ်
သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ညမှာ ဘုရားရှင်ကို ရည်မှန်းပြီး မီးရှူးမီးပန်းများ၊
မီးပုံး၊ ဆီမီးရောင်စုံတို့ဖြင့် ပူဇော်မှုပြုလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ တာဝတိံသာမှ ဆင်းသက်တော်မူသည်ကို အကြောင်းပြုပြီး
တာဝတိံသာပွဲတော်၊ တာဝတိံသာနတ်ပြည်ရှိရာ မြင်းမိုရ်တောင်ထိပ်မှ
ဆင်းသက်တော်မူသည်ကို အကြောင်းပြု၍ မီးမြင်းမိုရ်ပွဲဟု ခေါ်ဝေါ်ကြခြင်း
ရဟန်းတော်များဟာ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့မှာ ၀ိနည်းဒေသနာတော်အရ ဥပုသ်အစား
"ဖိတ်ကြားခြင်း၊ တောင်းပန်တိုက်တွန်းခြင်း'' လို့ အဓိပ္ပာယ်ရသော
ပ၀ါရဏာပြုကြရပါတယ်။ ဤပ၀ါရဏာပြုခြင်းသည် ဘုရားရှင်လက်ထက်ကပင်
ပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတ၀န်ကျောင်းတော်၌
သီတင်းသုံးဖော် ရဟန်းတစ်စု အချင်းချင်း မခေါ်မပြော နေထိုင်ကြသည်ကို
အကြောင်းပြုပြီး ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုနည်းတူစွာ ဘုရားရှင်အား
ဖူးမျှော်ကန်တော့တဲ့ အစဉ်အလာကို အစွဲပြုပြီး မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့သည်
သီတင်းကျွတ်တဲ့အခါ သက်ကြီးဝါကြီးများအား ပူဇော်ကန်တော့တဲ့
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Friday, October 02, 20093comments: